အဆိုးနဲ့အကောင်း – Nya Hmwe Pann
ဆောရီး ဗျာ၊ ကျနော်က ခေါင်းစဉ် ရေးထားတာပါ အဟီး၊ ဒီအထဲရောက်နေမှတော့ ဖတ်ချင်တဲ့ဟာဖတ်ကြပါ၊ အဟီး ခေါင်းစဉ်လည်းခေါင်းစဉ်၊ ကိုယ့်ပယောဂလည်း လွတ်အောင်ရေးထားတာ၊ ရေးမဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပြောလိုက်ရင်လည်း ဖတ်မဲ့သူတွေ အရသာပျက်သွားမယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်လည်း လျို့ဝှက်ဇာတ်လမ်းမဟုတ်တော့ ခွိး၊ပြောပြပါမယ်၊ အခြေခံလေးတွေ။ ဇာတ်ကောင်တွေက ဘဝမှာ စပြီး လွတ်လပ်တဲ့၊ မိဘ အရိပ်အောက်က လွတ်ကာစ အသက် ၂၀ ကျော် ၃၀ တွင်းမှာ၊၊ ကိုယ့် ပါဝါအာဏာရကာစ တွေမှာ၊ ဘဝကို စထိတွေ့ ရပြီး၊ ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်စလုပ် ရင်း အမှားတွေတွေ့ အမှန်ကို ရှာ၊ လူတွေရဲ့ သဘောကို စသိလာကြရတဲ့ အရွယ်၊ အဲဒီအချိန် အရွယ်တွင်းလောက်မှာ ကာလံ၊ဒေသံ အဂ္ဂံ ပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့ လုပ်ခဲ့ကြတာတွေကို မှားတယ် မှန်တယ် မဆုံးဖြတ်ပဲ၊ အရှိကို အရှိတိုင်း ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝလေး တွေကို ရေးမလို့။ အဲဒီ အရွယ် ကျော်လာရင် ရင့်ကျက်သွားပလား ဆိုတော့ အဲလိုလည်း မဟုတ်ဘူး ၊ဘဝ ဆိုတာ သေတဲ့အထိ အတွေ့အကြုံ အသစ်တွေ ဗဟုသုတ အသစ်တွေ ယူတတ်ရင် ရနေအုန်းမှာပဲလေ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အရွယ်က ကျနော်ထင်တယ်၊ ကျနော့် အတွေ့ အကြုံအရ ဆိုရင်တော့ အဆိုးဆုံး အရွယ်ပဲလေ၊ သူတို့ စိတ်ထဲ မှာ ကမ္ဘာကြီးကို သူတို့ ပြောင်းလဲ ပစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်နေကြတဲ့ အရွယ်ကိုး၊ ဆရာကြီးတဦးကသူ့ရဲ့ စာအုပ်တအုပ်မှာ၊ ရေးတေးတေးမှတ်မိသလောက်က သူ့သားကြီး ဘွဲ့ရ ကျောင်းဆင်းကာစ အလုပ်ထဲ ဝင်တော့ တက်ကြွနေတာကို ရေးထားတာ၊ …အး ဒီအရွယ်တွေက ယန္တရား ကြီးကို သူတို့က ပြောင်းလဲ ပစ်နိုင်မယ်လို့ထင်နေကြတာတဲ့၊ နောက်တော့လည်း ယန္တရား ကြီးကပဲ သူတို့ ကို ပြောင်းလဲပေးလိုက်မှာပါတဲ့.. အဲလိုဆန်ဆန်လေးပေါ့ဗျာ၊ ကျနော် ဆိုလိုချင်တာက အဲဒီအရွယ်မှာ ဘယ်ဟာ မဆို ငါ အသစ် လုပ်ပြလိုက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေး တွေ ဝင်ပြီး တက်ကြွလာခဲ့ကြတာ၊ လေးငါးဆယ်နှစ်လောက်၊ ကြာတော့မှ နည်းနည်း လေး တည်ငြိမ်လာရင်း၊ အေးလေ ငါလုပ်ချင်သလို မဖြစ်တော့လည်း လုံးလုံးကြီး အသစ်မဖြစ်တောင် နည်းနည်းတော့ ပြောင်းကြည့်ရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်လေး ပေါ်လာကြတယ်၊ အဲတော့ ကျနော်ရေးမဲ့ ဒိဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်လေး တွေကို လူကြီးတွေက ခွင့်လွှတ်ကြပါ၊
လူငယ်တွေက အဲဒါအမှန်လို့ အတုယူ မမှားစေလို လို့ပါ၊ အဲဒါကြောင်း နည်းနည်း သတိထားမိအောင် ခေါင်းစဉ်တတ် လိုက်တာပါ၊ အဟီးဟီး။ သုံးဆယ်အောက်တွေ လည်း ဖတ်လို့ရပါတယ်၊ ဒီအထဲ မှာ ဟို အင်းစက်တို့၊ တိရစ္ဆာန်နဲ့ လုပ်မှာတို့၊ယောက်ျားချင်းတို့၊ နှိပ်စက်ရိုက်နှက်တာတို့ ပါမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒါတွေကြောင့် သုံးဆယ် အောက်မဖတ်ရလို့ လုပ်ထားတာလည်း မဟုတ်ပါကြောင်း၊ အားလုံးကို ခင်တဲ့ ကိုကြပ် အဆိုးနဲ့အကောင်း – ကြပ်ကြပ် မဟုတ်တာတွေ လုပ်ကြံ စိတ်ကူးယဉ်ရေးထားသည်။ အင်း ကျနော့်နာမည်က ပေါ်ဦး ၊ကျနော်က နတ်မောက် စက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ က ကျောင်းဆင်းတာ၊ အခု တော့ ဌာနဆိုင်ရာ တခုမှာ အသက် ၂၀ နဲ့ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်နေပြီ၊ အခု ချိန်ထိကတော့ လူပျို၊ ကျနော့် ဆရာနာမည်က ကိုမိုးအောင်၊ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ ရာထူး အရှိန်အဝါနဲ့ ဆိုတော့ လူငယ်ပေမဲ့ သူ့ကို ဦးမိုးအောင်လို့ခေါ်ကြတယ်၊ သူက လူပျို အသက်က အခုမှ ၂၅ နှစ်စွန်းစွန်းပဲ ရှိသေးတာ၊ ကျနော် က နတ်မောက်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ က ကျောင်းဆင်းပြီး အလုပ်ထဲစဝင်တော့ အကိုက အေအီးဖြစ်နေပြီ။
ကျနော်က ကျနော့်ဆရာ့ကို အကိုပဲခေါ်တယ်၊ သူက ကျနော့်ရဲ့ တကယ့်အကိုအရင်းလိုပဲ၊ ကျနော် တို့ အလုပ်စဝင်တော့ သူက လည်း အေအီးပေါက်စ ဆိုတော့ ကျနော်တို့နဲ့ ဒိုးတူပေါင်ဖက်လိုမျိုးလုပ်တယ်၊ ဆာဗေးတွေ ဘာတွေသွားရင်၊ ရွံ့ထဲ တောထဲ၊ နေရာအနှံ့ ကျနော်တို့နဲ့ အတူ သွားတယ်၊ အတူလုပ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူက စာတွေ့ရော လက်တွေ့ရောက တော်တော်ကျွမ်းတယ်၊ ကျနော့်ကိုလည်း ဆရာစားမကျန် အကုန်သင်ပေးတယ်၊ ကျနော့် အဆင့်မှီသလောက်ပေါ့လေ၊ ကျနော့်အထက် အက်စ်အေအီးတွေကတောင် လေးစားကြပါတယ်၊ ထားပါတော့ ကျနော်ပြောချင်တာက သူ့စိတ်ဓါတ်ကိုသိသွားတော့၊ သူ့နောက်က လိုက်ရတာကို ကျနော်လည်း သဘောကျတယ်၊ သူကလည်း သူခိုင်းသမျှ မငြီးမငြူလုပ်ပေးတော့ ကျနော့်ကို ညာလက်ရုံးလို သဘောထားတယ်၊ နောက်ပိုင်း သူ ပရောဂျက်အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်တော့၊ ကျနော့်ကိုခေါ် သွားတယ်၊ သူဘယ်နေရာတာဝန်ကျကျ ကျနော့်ကိုခေါ်သွားပါလို့ကျနော်ကလည်း အပူကပ် ထားတယ်လေ။
အကိုက စာလည်း တော်တော်ဖတ်တယ်ဗျ၊ အဲကျနော်ကတော့ စာသိပ်မဖတ်ဘူးဗျ၊ အကိုပြောတာပဲ သော်တာဆွေ ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာကြီးရေးထားတာ ပေါ်ဦးနဲ့ အေးဆွေ ဆိုလား၊ ဆရာတပည့်နှစ်ယောက် ရှိတယ်တဲ့၊ ရီရတယ် ဆိုလား၊ နင်က တော့ ပေါ်ဦးဖြစ်နေပြီ၊ ငါက အေးဆွေ မဟုတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်တဲ့၊ ဒါပေမဲ့စာအုပ်ထဲက ပေါ်ဦးက ဥာဏ်အရမ်းကောင်း ပြီး ၊ အေးဆွေက ထုံတယ်တဲ့၊ ငါတို့ကတော့ ပြောင်းပြန်တဲ့၊ ပြီးတော့ မှ အလကားစတာပါကွာတဲ့၊ အဟီး၊ အကိုက ကျနော့်ကို ထုံတယ်ပြောလည်း တကယ်တော့ ဘာစိတ်ဆိုးစရာ ရှိမလဲဗျာ၊ သူက တကယ်လည်း ထက်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အဲလို ရာထူးတွေ ရှိနေတာပဲဟာ၊ သူက သဘောလည်းကောင်းတယ်။
နယ်မြို့လေးတွေ မှာက ပရောဂျက် အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတာက အကောင်လေ၊ ပရောဂျက်က ပိုက်ဆံ၊ ဒီဇယ်၊ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းတွေ က သူ့လက်ထဲ မှာရှိတာလေ၊ မြို့နယ်ကောင်စီ ဥက္ကဌ ကတောင် ဦးမိုးအောင်၊ ဦးမိုးအောင် ဖြစ်နေတာ၊ အဟီး၊ သူတို့ လိုချင်တာလည်းတောင်းလို့ရတာကိုး၊ ဥပမာဗျာ၊ မြို့နယ် ဘောလုံးကွင်း မှာ ဂိုးတိုင် လုပ်ဖို့ လေးလက်မ သံပိုက်တွေ လိုချင်လို့ဆိုလည်း စခန်းမှာ လာတောင်းတာပဲ၊ အဲဒါက အကြမ်းပြောတာ၊ အဟီး တခြားပါစင်နယ် အကူအညီတွေတော့ မပြောတော့ဘူး၊ ကျနော်တို့ကလည်း သူနဲ့ လိုက်ပြီး ခရီးသွားရရင် မျက်နှာပွင့်တယ်ဗျ၊ အကိုက အရက်လည်း အတော်တော့ ချနိုင်တယ်ဗျ၊ ကျနော်တို့ စခန်းက မြို့နယ်နှစ်ခု ဘော်ဒါတည့်တည့်မှာရှိနေတော့ အဲဒီမြို့နယ် နှစ်ခု စလုံးက စခန်းမူး တွေက အကိုနဲ့ အရက်သောက်ဖက်ဆိုတော့ ဆားပုလင်းတွေ ဆိုတာတော့ ပြောမနေနဲ့ပေါ့ဗျာ၊ အဲဒါတွေ ဘာလို့ထည့်ပြောရသလဲ ဆိုတော့ ၊ အဟီး၊ အဲဒီ ဆားပုလင်း တွေနဲ့ အတူတူ သူတို့ နယ်မြေထဲက ဖာဘိ တွေ သွားရင် ဖရီး ဆော်ရတယ်ဗျ၊ အဟီး၊ အဲတော့ ကျနော်တို့လည်း ရွှေနားကပ်ရောင် နဲ့ ပါးပြောင်တာ ပေါ့ဗျာ၊ အကိုနဲ့ လိုက်သွားရင်၊ ကိုယ်လည်း အရိုးလေး ဘာလေးစုပ်ရတာပေါ့၊ ခိခိ။ ကျနော်ဘာလို့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်မပြောပဲ ကျနော့်ဆရာအကြောင်းပြောနေသလဲ၊ ဟုတ်လား၊ အင်းဗျ၊ အဲဒါ အစမို့လို့လေ၊ သူ့ အကြောင်းပြောထားမှ ၊သူ့ ကို အမှီပြု ပြီး ကျနော် ဗြင်း ခဲ့ရတဲ့ စော်တွေ အကြောင်း ပြောတဲ့ အခါ ခင်ဗျားတို့ လိပ်ပတ်လည်မှာလေ၊ ဟဲဟဲ။
အကိုက လူတမျိုးဗျ၊ လူပျိုသာ လူပျို ကျနော်တို့ လိုငမ်းငမ်းတက်ကြီး မဟုတ်ဘူး၊ သူစိတ်ဆာရင် တော့ အတင်းကြီးပဲဗျ၊ အဟီး ၊တခါတုန်းက ကျနော်တို့ စခန်းအနောက်ဘက်ခြမ်းမြို့နယ်က ဆားပုလင်းနဲ့ အကိုရယ် ကျနော်ရယ် အရက်သောက်ကြရင်း ထွေလာတော့ ဘိသွားမယ်၊ သူပိုင်တယ် ဆိုပြီး အဲဒီဆားပုလင်းက ထလုပ်တော့ သွားကြမယ်ပေါ့၊ ကျနော်တို့ ဆိုင်ကယ်တစီးစီနဲ့ လစ်သွားကြရော၊ ညတောင်မှောင်နေပါပြီ၊ အဲဒါ ဟိုရောက်တော့ ဆားပုလင်းပါလာတော့ ဘိအုံနာ က ပြာပြာသလဲ ပေါ့၊ စော်လေးတွေ လည်း သိပ်မကျန်တော့ဘူး တယောက်နှစ်ယောက်ပေါ့၊ အဲဒါ အကိုက ဆားပုလင်းနဲ့ ကျနော့်ကို မင်းတို့ပဲ သွားကြပါ ငါမသွားတော့ဘူးတဲ့၊ ဆိုတော့ ဆားပုလင်းက ဟာ ဦးမိုးအောင်ကလည်း အဲလိုမလုပ်ပါ နဲ့ဗျာ၊ ဒီမှာလိုချင်တာ ရအောင်လုပ်ပေးပါ့မယ် လုပ်နေတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အိမ်နောက်ဘက်က မိန်းမ တယောက်ဝင်လာတော့ အကိုက လှမ်းကြည့်ပြီး၊ အင်း ဒါဆိုငါသူ့ခေါ်သွားမယ် လို့ပြောလိုက်တယ်၊ ခေါင်းက ဟာ အကို ဒါ ကျနော့်မိန်းမ ပါ ဆိုတော့ ၊ ကျနော့်မှာ ဗျာ မျက်နှာပူလိုက်တာ၊ စောက်ပြဿနာ တော့တက်ပြီပေါ့၊
ဒါပေမဲ့ ဆားပုလင်းက အဲဒီခေါင်းကို ပုခုံးဖက်ပြီး အခန်းပြင်ခေါ်သွားလေရဲ့ သူတို့ ဘယ်လိုတွေ ပြောကြလဲ တော့ မသိဘူး၊ ခနနေတော့ ပြန်ဝင်လာကြတယ်၊ ဆားပုလင်းက၊ …ဦးမိုးအောင် ရေ ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ်ခေါ်သွားလို့တော့ မရဘူး၊ ဒီမှာပဲ တနာရီလောက် နေသွားရင်တော့ရမယ်တဲ့ ဖြစ်မလား… ဆိုတော့ အကိုက အင်းဒါလည်းရတာပဲတဲ့၊ ကျနော့်မှာတော့ ပါးစပ်အဟောင်းသားဗျာ၊ တောက်၊ ကျနော်လည်း အဲလိုရ မယ်ဆိုရင်တော့ လိုချင်တာပေါ့ဗျ၊ အဲဒီစော်က မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း အသားဖြူဖြူ နဲ့ သန့်သန့်လေး၊ ကိုယ် က ပါးစပ်က ပြောထွက်ဖို့နေနေသာသာ၊ စိတ် က ဘယ်လိုမှ ရနိုင်မယ်လို့ မထင်မိတာကိုး။
နောက်တော့ စခန်းကို ပြန်လာမှ အကိုက ကျနော့်ကို ပြောတယ်၊ အဲဒီကောင်မလေးက အသစ်ကလေး ဆိုပဲ၊ ခေါင်းက အသစ်ကလေး ဆိုတော့ ဖရီးမပေးချင်လို့ သူ့မိန်းမ ဆိုပြီးလုပ်ထားတာတဲ့။ …အကို က အစထဲက သိနေတာလား.. ..ဟင့်အင်း မသိပါဘူးကွ၊ အဟီး၊ ငါကအဲဒီကောင်မလေး တွေ့တော့ စိတ်ထဲ တမျိုးလေး ဖြစ်သွားတယ်၊ ရရင် ရ မရရင်နေပေါ့ကွာ၊ ဟဲဟဲ၊ ကိုချစ်မောင် ကလည်း သူပိုင်တယ် ပြောထားတော့ ဘယ်လောက်ပိုင်လည်း စမ်းချင်လို့လေ၊ ဟဲဟဲ… ..ဟာဗျာ အကိုကလည်း ၊ လက်လန်တယ်၊ ဟိုခေါင်းက ကျနော့်မိန်းမ ပါပြောတော့လည်း အကိုက ခပ်တည်တည်ပဲ၊ အဟီး ဆောရီးလည်း မပြောဘူး၊ နေပါ့စေလည်း မပြောဘူး၊….ကျနော့်မှာလန့်နေတာ… …မင်းကလည်း ဘာလန့်စရာရှိလဲကွ၊ သူတို့ မရောင်းနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းကို ရှေ့ မှာ ချပြပါ့မလားကွ..ငါလည်း ထင်လို့စမ်းလိုက်တာ ဟဲဟဲ.. ..ဘယ်လိုနေလဲ အကို ကောင်းလား ဟီးဟီး.. ..မဆိုးပါဘူးကွ၊ ဒါပေမဲ့ အသစ် ကလေး ဆိုတော့ အတွေ့ အကြုံမရှိသေးဘူးလေ၊ အပြုအစုသ်ိပ်မကျွမ်းသေးဘူး၊
အပေါက်ကတော့သိပ်မကျယ်သေးဘူး၊ ရုပ်ကလေး ဘော်ဒီလေးကတော့ မဆိုးဘူး…. …………………………… တကယ်တော့ စခန်းမှာ ကျနော်က အခရာဗျ၊ လူတိုင်းက သူတို့ လိုချင်တာ ရှိရင် ကျနော့်ဆီကို ကပ်ရတယ်လေ၊ အဟဲ၊ သူတို့က အကို့ကို ဒဲ့ မကပ်ရဲဘူးဗျ၊ အကို့ကို ကျနော့်စကားပေါက်တယ် ဆိုတာသိတော့၊ ကျနော့်ကို ပဲလာလာပြောကြတယ်၊ နောက် ကျနော့် ကိုလည်း သူတို့က သူတို့ ရဲ့ညီအကိုမောင်နှမ လိုပဲလေ၊ သိတယ်မလား၊ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်က ဖီလင်ရှိတယ်လေ၊ သူတို့ ခံစားချက်တွေ နားလည်တယ်၊ အကို့ကို ကျနော်က နားမလည်ဘူး လို့ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်လိုမဟုတ်ဘူးလေ၊ သူကတော့ တာဝန်ရှိတဲ့သူ မို့လားမသိဘူး၊ တခါတလေကျရင် ဘာမှ အားမနာဘူး၊ ပြောပစ်လိုက်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အကိုက စိတ်ဖြောင့်မှန်းသိလို့ သူတို့က ကြောက်ရွံ့ ရိုသေပေါ့။ အက်အေအီးကိုသန်းတိုးကိုတော့ သူတို့ က အေအီးထက်ပိုကြောက်ကြတယ် အဟီး။ ကိုသန်းတိုး ဆိုမှ ကိုသန်းတိုး ရဲ့ မိန်းမ မမြတ်မွန် က တော့ မိုက်တယ်ဗျာ၊ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီး ဆိုတာ သူကမှ တကယ်ဗျ၊
နောက်ပြီးတော့ မမြတ်မွန်က တကယ်ထန်တဲ့ စော်ကြီးဗျ၊ အကို့ကို ကျနော်ခနခနပြော တာ အကိုက လက်မခံဘူး၊ မင်း စိတ်ထင်လို့ပါ ပဲ အမြဲပြောတယ်၊ လူတွေ ဘာတွေနဲ့ ခတ်လှမ်းလှမ်း ဆိုရင်၊ ကျနော့်ကို စကားပြောတာ က ဟိုပုတ်ဒီပုတ်နဲ့၊ ဟိုတနေ့က လည်း ရွာထဲသွားဖို့ အဖေါ်ခေါ်တော့ လိုက်သွား ရတယ်၊ ပြန်လာတော့ မှောင်ရီ ပျိုးစ တာဘောင်ပေါ်မှာ သူနဲ့ ကျနော်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ၊ မောင်ပေါ်ဦးရဲ့ ရွှံ့တွေက အရမ်းချောတာပဲ ငါ့ကို တွဲစမ်းပါ ဆိုပြီး ကျနော့်လက်မောင်းကို ခိုလိုက်လာတော့ သူနို့ကြီးတွေက လာလာ ဖိနေတာအိနေတာပဲဗျာ၊ ကျနော့်မှာ အတွင်းခံဝတ်ထား လို့တာပေါ့၊ အဲဒီနေ့က ခံလိုက်ရတာ ဘောတောင်အောင့်တယ်။ နောက်ပိုင်း ကျနော်ကလည်း လူလစ်ရင် လစ်သလို အမ ဘာညာ နဲ့ ရသလောက်ကပ် ဖီးယူပြီး ညှော်ခံ နေမိတယ်၊ အဟီး၊ ကျနော် ဘာညာသရကာ ပေးနေတဲ့ စခန်းက ကောင်မလေး စန်းတင့် ကတောင် ကျနော့်ကို၊ ကိုပေါ်ဦးကြီး နော် မျက်စေ့ကိုနှောက်နေတာပဲ လုပ်နေလို့၊ နောက်ဆို လူ အရိပ်အခြည် တော်တော် ရှင်းမှ ကပ်တော့တယ်၊ အဟီး၊ ကိုသန်းတိုးကြီးလည်း ကြောက်ရတယ်လေ။ တနေ့ ကိုသန်းတိုးကြီး မြို့ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့တက်မယ် ဆိုတော့ ကျနော် မမြတ်မွန်ကြီးကို ဝိုက်ချင်နေတာ အခြေခံလေး တော့ပျိုးထားအုန်းမှ လို့ စဉ်းစားမိတယ်၊ အဲတော့ နည်းနည်း သွားကြောင်းတာပေါ့ဗျာ၊
..အမမြတ်မွန် ..ညရေးညတာ အကူညီလိုရင် အားမနာနဲ့နော်..ကျနော့်ကို အသံသာပြုလိုက်… ..ဟင်းး အေးပါ ပေါ်ဦးရယ်…ငါက နင့်ကို အားကိုးပါတယ်..နင်က နောက်နေ့ အလုပ်တွေလည်းရှိတော့..ညဘက်ငါက အနှောက်အယှက် မပေးချင်ပါဘူး….. ..ဟာ မဟုတ်တာ အမမြတ်မွန်ကလည်း…ဘာမှ အဲဒါတွေ ခေါင်းထဲ မထားနဲ့..ကျနော် တချက်တချက် ကင်းလှည့်ပေးမယ်.. တကယ်တော့ကျနော် ကြံထားတာ သူများတွေ အိပ်မှ လဘက်ရည်လေး တခွက်ဖျော်ပြီး အမ အတွက်ဆိုပြီး အခန်းထဲ ဝင်မယ်၊ ပြီးတော့ မီးစင်ကြည့်က မယ်ပေါ့၊ ဟဲဟဲ။ အကိုက မီးပိတ်လိုက်တော့ ဆိုတော့ ကျနော်က မီးစက်သတ်လိုက်ပြီး၊ အေးဆေးထိုင် ဆေးလိပ်ဖွာနေလိုက်တယ်၊ စခန်းတခုလုံးအိပ်မောကျလောက်မှ လဘက်ရည်ထည့်ထားတဲ့ ဓါတ်ဗူးလေး ဆွဲပြီး မမြတ်မွန်အခန်းဘက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်၊ သူတို့ အနောက်ဘက်ကနေ ပတ်သွားရင် စခန်းက လူတွေ မမြင်ရဘူး ဆိုတော့ အနောက်ဖက်က ပဲ ပတ်သွားလိုက်တယ်၊ မမြတ်မွန် အခန်းအနောက်ဘက်ရောက်တော့ အထဲက စကားပြောသံလိုလို ကြား လိုက်ရတယ်၊ ဟိုက်၊ ဘယ်ကောင်များလက်ဦးသွားပြီလဲ ဆိုပြီး ဝါးထရံကြားအပေါက်ကနေ မမြတ်မွန်တို့ အိပ်ခန်းထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်တယ်၊
ဟာ၊ အကိုပါလား၊ ဟိုက် ငါ့အကို ဒါမျိုးကျတော့ တယ်လက်သွက်ပါလား၊ ငါတောင် မသိလိုက်ဘူး တော်တော်လုံတာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကြည့်ရတာဘာမှ တော့ မဟုတ်သေးဘူး ထင်တယ်။ ကျနော် သေခြာချောင်းလိုက်မှ သိသွားတယ်၊ အကိုက သူ့မီးချောင်း ကို မြတ်မွန်အတွက် လာပေးနေ တာကိုး၊ မမြတ်မွန် သူ့စားပွဲအောက်က ဘက်ထရီ ကုန်းထုတ်နေလိုက်တာ၊ ဖင်ကြီးကို နောက်ဘက်ကော့လို့၊ အဟီး ကျနော်သာ အကို့နေရာမှာ ဆိုရင် ဆိတ်သိုးကြီးလို အုန်းကနဲ ဝင်ခွေ့မိမလားပဲ၊ တောက်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ဖင်ကြီး။အကိုလည်း ကြည့်နေတာ ကျနော်တွေ့ နေတယ်၊ အဟီး ကျနော့်စိတ်ထဲ မှာတော့ အကို လှမ်းကောင် ကိုင်လိုက်ပြီလို့ထင်နေတာ၊ အမလေးဗျာ၊ နေရာသာလဲ လိုက်ချင်ပါတော့တယ်။ ဟိုက် အကိုပြန်ထွက်လာတော့မယ်၊ ကျနော် ကမန်းကတန်း လျှောက်လမ်း နဲ့ အိမ်ခန်းထောင့်အစွန် လေးကို ပြေးပြီး ပုန်းလိုက်ရတယ်၊ အကို ထွက်သွားပြီး တော်တော်လေး အသံတွေ တိတ်သွားမှ ကျနော် မမြတ်မွန်ရဲ့တံခါးကို အသာလေး သားခြစ်လိုက်တယ်၊ ပုတ်တော့မပုတ်ရဲ ဘူး အကိုကြားသွားမှာစိုးလို့၊ မမြတ်မွန်ကလည်း အထဲက လေသံလေးနဲ့မေးတယ်၊ …ဘယ်သူလည်း..ကိုမိုးအောင်လား… …
ကျနော်ပါ အမမြတ်မွန်..ပေါ်ဦးပါ… မမြတ်မွန်က တံခါးဖွင့်ပေးတယ်၊ ပီးတော့ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ အထဲဝင်လာဖို့လည်းပြတယ်၊ သူနူတ်ခမ်းကိုလည်း လက်ညိုးကန့်လန့်ထောင်ရင်း အသံမထွက်ဖို့ ပြတယ်၊ ခွိး၊ အဲလောက်ဆိုရင်တော့ ကျနော်ဓါတ်နေပြီလေဗျာ၊ တဘက်ခန်းက အကို့ ကို မကြားစေချင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်ကိုတော့ သူ့အခန်းထဲ ခေါ်သွင်းတယ် ဆိုကတည်းက ဟီးဟီး၊ ကျနော့် လက်ထဲက ဓါတ်ဗူးတို့ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးတို့ကို ကြမ်းပေါ်မှာ အသံမမြည်အောင် အသာလေး ချလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့မှ ကျနော့်ကို အရည်ရွှမ်းတဲ့ မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ မမြတ်မွန် အနားကို သွားပြီး သိမ်းကြုံးပွေဖက်ပစ်လိုက်တော့ တယ်။ မမြတ်မွန်က ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို သာသာလေးတွန်းလိုက်ပြီး လက်ညိုးနဲ့ ဘက်ထရီ မီးချောင်းကို ထိုးပြ လို့ ကျနော်လည်းခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ပြီး ဘက်ထရီငုတ်မှာတတ်ထားတဲ့ မီးချောင်းက ကလစ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်၊ အခန်းထဲ အမှောင်ကျသွားမှ မမြတ်မွန်ရဲ့ လက်ကိုဆွဲလို့ ကုတင်ရှိရာဘက်ကို ခေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
အခန်းထဲမှာ မှောင်ပိန်းနေလို့ ဘာမှမမြင်ရပေမဲ့လည်း၊ မမြတ်မွန်ရဲ့တကိုယ်လုံးက ကျနော်အလွတ်ရနေတာမို့၊ ဘယ်ကိုင်ကိုင်အရသာရှိနေတော့တာပဲ၊ နောက်ပြီးဆပ်ပြာမွှေးခေါင်းရှော်ရည်အကောင်းစား တို့နဲ့သူ့ကိုယ်နံ့သင်းသင်းလေး ရောပေါင်းထားတဲ့ အနံ့ကလည်း ဆက်ဆီဖြစ်သလားမမေးနဲ့၊ ကျနော့်မှာ မမြတ်မွန်တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သတ်နမ်းရှုံ့နေလို့တောင် တော်တော်နဲ့ မဝနိုင်ဘူးဖြစ်နေရတယ်၊ ခနလေးအတွင်းမှာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကအဝတ်အစားတွေလည်း မရှိတော့လို့လုံထွေးဖက်နေရတာက ကလည်း အရသာရှိလိုက်တာဗျာ။ မမြတ်မွန် နိူ့လုံးတွေပေါ်မှာ ကျနော့်မျက်နှာနဲ့လျှောက်ပွတ်ရင်း ပါးစပ်က စမ်းမိတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက်တာမမြတ်မွန်တယောက် ကော့ကက်တက်လာပြီး သူ့ပေါင်လုံးကြီးတွေနဲ့ ကျနော့်ခါးကို ခွညှပ်လာတော့တာပေါ့၊ သူ့စောက်ဖုတ်ကလည်းအရည်ဘယ်လောက်ရွဲသလဲ မရွဲသလဲ ဆိုရင်ကျနော့်ပေါင်တွေမှာတောင်စေးကပ်ကပ် လာဖြစ်တယ်၊
အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်းလက်တဖက်က ကိုယ့်ကောင်ကြီးကိုကိုင်၊ တခြားတဖက်ကသူ့စောက်ဖုတ်အဝကိုစမ်း၊ ပြီးမှတေ့ပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်းဖိသွင်းချလိုက်တော့တယ်၊ သူကလည်းအသံထွက်မိမှာစိုးလို့လား ဖီးတက်လာလို့လား တော့မသိဘူး၊ ကျနော့်ပုခုံးကိုလာကိုက်တာ အာတချက်စူးကနဲတောင်ဖြစ်သွားတယ်၊ ဝင်သွားတော့လည်းကြိတ်ဖိလေးပေါ့ဗျာ၊ တကျွိကျွိအသံလည်းမထွက်ရအောင်၊ ထိန်းပြီးဆောင့်ရတာပေါ့၊ ကောင်းလိုက်တာဗျာ၊ ကိုသန်းတိုးကပဲမဆွဲတာကြာလို့လား၊ မမြတ်မွန်ကပဲထန်လွန်းတာလားမသိဘူး၊ ကောင်မကြီးကလူးလိမ့်နေတာပဲ၊ ကျနော့်ကိုစကောဝိုင်းပေးနေသလိုတောင်ဖြစ်နေရတယ်၊ အဲဒီညက အာရုံမတက်ခင်ကိုယ့်အခန်းကိုယ်ပြန်ပြေးလာခဲ့ရတယ်၊ ကျနော်တော့သုံးချီအားရပါးရ ကိုဆွဲခဲ့တယ်၊ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးတွေပါပဲ၊ တခါတော့ လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီးစမ်းသေးတယ်၊ လေသံဗွက်ကနဲတချက်ထွက်လာတာနဲ့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ပုံစံပြောင်းလိုက်ရတယ်၊ ကိုသန်းတိုးလည်း ပြန်လာအုန်းမှာ မဟုတ်သေးတော့ မနက်ဖြန်ဘယ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာ ကျနော်ကတွေးထားပြီးသားဆိုတော့ သိပ်မလောပါဘူး၊ လုပ်ချင်နေတာလေးကို အာသာဖြေလုပ်လိုက်ရရင်ပြီးတာပဲ၊ မနက်ဖြန်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့လို့ရမယ် လို့မမြတ်မွန်ကိုလည်းပြောထားလို့သူကလည်း သဘောတူထားတယ်လေ၊ ဟဲဟဲ။ အကိုတို့ကတော့တကယ်ပဲ၊ တခါတလေကျတော့လည်း ငါးကျော်မကြိုက်ဘူးခွိခွိ။ ကိုယ့်ရှေ့မှာဒီလောက် အနံလေးတသင်းသင်းနဲ့ချပေးထားတာကို၊ မစားချင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲမသိပါဘူးဗျာ။
နောက်နေ့အိပ်ယာကနိုးတော့ အိပ်ရေးကမဝချင်ဘူးဗျာ၊ အဟီးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေ၊ ဘယ်ဝမလဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဆက်အိပ်လို့မဖြစ်ဘူး၊ ကန်ထရိုက်တာနဲ့အလုပ်သမားတွေ စောင့်နေကြလိမ့်မယ်၊ အကိုသိသွားရင်လည်း ဆဲခံရလိမ့်မယ်၊ စောစောစီးစီးနေရာသွားချပေးပြီးမှ ကြုံတဲ့နေရာအိပ်လိုက်မယ်၊နေ့လည်ဘက်မမြတ်မွန်နဲ့ ချိန်းထားတာကလည်းရှိသေးတယ်မလား။ အဲဒါနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ရှိရာသွား ကန်ထရိုက်တာနဲ့ ဒီနေ့ လုပ်ရမဲ့ဟာတွေ ပြန်ညှိ ပြီးတော့ အလုပ်သမားတွေ အလုံအလောက်ရှိရဲ့လား နည်းနည်းပါးပါး လေ့လာပြီးတော့မှ ရွာထဲက ကောင်တကောင်ကို ခေါ်ပြီး တီးတိုး မေးရတယ်၊ ကျနော်တို့ စခန်းနဲ့ ကပ်ရက် လယ်ကွင်းတွေက တမျှော်တခေါ်ကြီးဗျ၊အဲဒီမှာ လယ်စောင့်တဲလေးတွေပဲ၊ ဟိုတကွက် ဒီတကွက်ရှိတာ၊ ဒီလို ရာသီဆို များသောအားဖြင့်လူမရှိကြဘူး၊ လူတွေက ရွာပြန်နေကြတယ်၊ ရွာက ဟိုဘက်ကမ်းမှာ လှေနဲ့ သွားကြရတာ၊ ကျနော် သွားနပ်နေကြ၊ ဦးသာအေး တို့လယ်တဲမှာ လူရှိလားလို့မေးကြည့်တာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးဆိုတာသိရလို့၊ မမြတ်မွန်ကို အဲဒီလယ်တဲပင့်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အလုပ်သမားတွေ စလုပ်နေကြတာ အရှိန်ရနေကြပြီး နေ့လည်စာစားချိန်လည်းနီးလာတော့ စခန်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်၊ ထမင်းစားဆောင်ဘက်ရောက်တော့ အကိုက စားတောင်ပြီးနေပြီမို့ သူ့ကိုအဲဒီမှာပဲ အလုပ်အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်၊ အကို့ကို အလုပ်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပဲ ဦးကြီးဆောင်နဲ့ဒေါ်ကြီးထား တို့ ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ ထမင်းဟင်း အငွေ့တထောင်းထောင်းကို အားရပါးရ စားနေမိတယ်၊ ငါတော်တော်ဆာနေတာပဲလို့လည်းတွေးမိတယ်၊ ညက မမြတ်မွန်ဆီမှာ တော်တော် အားသုံးခဲ့ရတာကိုးလို့ ပြုံးမိသေးတယ်၊ နာရီကြည့်လိုက်တော့လည်း ၁၂နာရီတောင် မထိုးသေးဘူး ဆိုတော့ အချိန်ရှိသေးတယ်၊ တရေးလောက်အိပ်လိုက်အုန်းမယ်၊ ဆိုပြီး စားပြီးတာနဲ့ ၊ ကိုယ့်အခန်းကိုယ်အမြန်ပြန်လာလိုက်တယ်၊ ကုတင်ဘေး စားပွဲပေါ်က လစ်ပိုတလုံးဖေါက်ပြီး သောက်လိုက်တယ်၊ နောက်တော့ ဗိုက်တင်းတင်း၊ မျက်လုံးတွေလည်းလေးလာလို့ အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။
ဖတ်ကနဲ တရေးနိုးလာတော့ ကိုယ့်ကောင်ကြီးက အိပ်ယာနိုးစ ထုံးစံအတိုင်း မာတောင်ပြီး ခေါင်မိုးပေါ်လှမ်းကြည့်နေပြီ၊ နာရီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့၊ တနာရီ၊ အင်း ငါတနာရီလောက် ကောင်းကောင်းအိပ်မောကျသွားတာပဲ၊ တော်တော်တောင်အားပြည့်သွားတယ်၊ ကမန်းကတန်းထ ပလုပ်ကျင်း မျက်နှာသစ်ပြီး ကိုသန်းတိုးတို့ အခန်းဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်၊ အကို့ အခန်းဘက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်သူမှ မတွေ့ဘူး၊ ကြည့်ရတာ ဂျက်တီဘက်ရောက်နေကြတယ်ထင်တယ်။ ….အမမြတ်မွန်..အမမြတ်မွန်….ရယ်ဒီလား..ကျနော်ရွာဘက်သွားတော့မလို့.. ..အေးအေး ပေါ်ဦးရဲ့ ခနလေး လာပြီလာပြီ၊… ကျနော်က လျှောက်လမ်းလေးပေါ်ကနေ မမြတ်မွန်ကို စောင့်နေတုန်း လမ်းလျှောက်လာတဲ့ စန်းတင့်ကို ..ဟဲ့စန်းတင့် အေအီးကိုပြောလိုက်၊ ငါ ဟိုရွာထဲက ငါးခြောက်ရောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတာ အမမြတ်မွန်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ လိုက်ပို့မလို့လို့နော်… …ဟုတ်ကဲ့ဦး…. မမြတ်မွန်က ရေစို(ဒီဇိုင်း)ထမိန် မရမ်းစေ့ရောင်နဲ့ အပေါ်ကလည်း ဆင်တူလက်ရှည်ရင်ဖုံးနဲ့ သနပ်ခါး ပါးကွက်ထူထူ နဲ့ ခမောက်အဝိုင်းကြီးကြီး ကို ဆောင်းထားတယ်၊ အသားတွေ နေလောင်ပြီး ညိုသွားမှာ စိုးလို့ထင်တယ်၊
ထမိန် ကလည်းခါးမှာတင်းနေအောင်စီးထားတော့ ဖင်ကြီးက လုံးတစ်ပြီး ကားထွက်နေတာ၊ ကျနော့်ကောင်ကြီးက အရမ်းကို တက်ကြွလွန်းလို့ အတွင်းခံထဲ တင်းကျပ်နေလိုက်တာ ခေါင်းတောင်နာတယ်။ မမြတ်မွန် ကိုကျနော်က နဂိုလ်ကြံရွယ်ထားတဲ့ လယ်တဲဆီကို ဦးတည်ပြီးခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်၊ လူပြတ်တဲ့ နေရာ မရောက်ခင်အထိကတော့ ပုံမှန်ပေါ့၊ အဟီး စခန်းနဲ့ရော အလုပ်နေရာနဲ့ရော နည်းနည်းလေး လှမ်းတဲ့နေရာရောက်မှ မမြတ်မွန်ရဲ့ ခါးလေးကို လှမ်းဖက်ပြီး သူ့သနပ်ခါးပါးကွက်ကြီးကို ရွှတ်ကနဲနမ်းလိုက်တယ်။ …..ဟဲ့ဟဲ့..ပေါ်ဦးရဲ့ ငါ့ သနပ်ခါးတွေ ပျက်လို့မဖြစ်ဘူးဟဲ့၊ ပြန်လဲ လိမ်းစရာမပါဘူး၊ အဲဒါတော့သတိထား… ..ဟင်..အမမြတ်မွန်ကလည်း သနပ်ခါးခဲလေးဘာလေး အပိုယူလာတာမဟုတ်ဘူး၊ဗျာ… ..အိုကွာ ဟိုနားဒီနားသွားတာပဲဟာ.. …အင်းပါ..အင်းပါ ကျနော်သတိထားပါ့မယ်….
ကျနော်က ပြောရင်းဆိုရင်း မမြတ်မွန်ရဲ့ ခါးကိုင်ထားတဲ့လက်ကိုအသာလျှောချပြီး ကျနော်အရမ်းသွားရည်ကျနေခဲ့ရတဲ့ မမြတ်မွန်ရဲ့ဖင်ကြီးတွေကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ ..ဟဲ့ ထမိန်တွေကျေကုန်ပါ့မယ်ဟယ်.. ကျနော်လက်ကို အသာလျှော့လိုက်ရပါတယ်၊ ဒီကောင်မကြီး ဟိုလယ်တဲရောက်မှ တွေ့ကြသေးတာပေါ့လို့ပဲ၊ စိတ်ထဲမှာ ကြုံးဝါးလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဦးသာအေးတို့ လယ်တဲက မြစ်ရေမတက်အောင်တုတ်ထားတဲ့ တာတမံ ဘေးနားမှာပဲရှိတယ်ဗျ၊ ရှေ့မှာက တမံကြီးနဲ့ ဓနိပင်တွေကွယ်နေလို့ မြစ်ကို မမြင်ရဘူး၊ တဲအနောက်ဘက်က တော့ မျက်စေ့တဆုံးစိမ်းနေတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်ကြီး၊ ရေတွေက စပါးပင်တွေရဲ့ အောက်ခြေမှာဖုံးနေတယ်၊ တချက်ချက် အော်လိုက်တဲ့ငှက်သံနဲ့ ဟိုးအဝေးက တခါတခါထတွန်လိုက်တဲ့ ကြက်ဖသံ ပဲကြားရတယ်၊ လေလေးတဖြူးဖြူး နဲ့တိတ်ဆိတ်နေတာပဲ၊ ဦးသာအေးတို့တဲက ဝါးကြမ်းခင်း၊ လူတွေတက် တာလှဲတာများသွားလို့ထင်တယ် ဝါးကြောတွေက အဆီတက်ပြီးပြောင်နေတယ်၊ ကပြင်ကနေ ကြမ်းပြင်ကိုလှမ်းတက်လိုက်တော့ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ အိကနဲညွှတ်သွားတယ်၊
အမိုးက နိမ့်လွန်းလို့ခါးကုံးဝင်ရတယ်၊ တဲက ကျနော် အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ဖူးလို့ သိနေပြီ၊ အတွင်းမှာ ဝါးထရံနဲ့ ကာထားတဲ့ အခန်းတခန်းပဲရှိတယ် တံခါးမရှိဘူး၊ အကာကလည်း လူတယောက် ခြေဆန့်တာလုံရုံလေးပဲရှိတယ်၊ တဲထဲရောက်လို့ သနပ်ခါးကျောက်ပြင်နဲ့ သနပ်ခါးတုံးလေးတွေတွေ့မှ သတိယတယ်၊ ဦးသာအေးက သမီး၃ယောက်ရှိတယ်၊ အလတ်မ က ကျနော်တို့ ပရောဂျက်မှာလုပ်နေတာ၊သူ့မှာ အကြီးဆုံးမ အသက်၂၀ လောက်တယောက်နဲ့ အငယ်ဆုံးလေး အသက် ၁၆နှစ် တယောက် က လယ်မှာပဲကူလုပ်နေကြတာလေ၊ ..ကဲအမမြတ်မွန် ဟိုမှာကြည့် သနပ်ခါးနဲ့ ကျောက်ပြင်တွေ့လား သနပ်ခါးအတွက်တော့ ဘာမှ စိတ်မပူနေနဲ့တော့ အဟီး၊ .. အဝတ်အစားတွေပဲ ကျေကုန်မှာစိုးရင် ချွတ်ထားလိုက်လေ..ဟဲဟဲ.. …ဟဲ့သေနာကောင်..ငါက ဘာလုပ်မှာမို့ချွတ်ရမှာလဲ… ….
ဟဲဟဲ အမမြတ်မွန်ကလည်းနောက်နေပြန်ပါပြီ.. ကျနော်က မမြတ်မွန်ရဲ့ လက်ကလေးကို ဆွဲယူပြီး သူ့ကိုယ်လုံးကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲထည့်လိုက်ကာ လည်တိုင်ကျော့ကျော့ကို နမ်းလိုက်ပါတယ်၊ ..ဟဲ့ နင့်နေရာက အိုးပန်းကြီး ပေါ်ဦးရယ် စိတ်ချရရဲ့လား…. ..ဟာ အမကလည်း အဲဒါကြောင့်စိတ်ချရတာပေါ့၊ မတွေ့ဘူးလား ဒီလောက် ဟင်းလင်းကြီး ကျနော်တို့ဆီကိုလာနေတာ ဟိုးအဝေးကြီးထဲက မြင်နေရမှာ ပတ်ပတ်လည်ကို၊ နောက်အသံလည်းကြားရမှာပဲ၊ သူတို့ကတော့တဲထဲကို ဘယ်မြင်ရမလဲ… ကျနော်က မမြတ်မွန်ရဲ့ကျောလေးကိုပွတ်ပေးရင်း လည်တိုင်တွေပါးပြင်တွေကို မွှေးမွှေးပေးရင်း ပြောပြနေတာလေ၊ မမြတ်မွန်လည်း တဲလေးထဲ နည်းနည်းအသားကျသွားတာရယ်၊ ကျနော်နဲ့ အနီးကပ်နေပြီး ဖိုဓါတ်ရလာလို့ စိတ်ကြွလာတာရယ်ကြောင့်ထင်တယ်၊ ကျနော်သူ့ နူတ်ခမ်းထူထူကြီးတွေကို ငံစုပ်ပစ်တော့ ပြန်နမ်းလာတယ်၊ အဲလိုသူနဲ့ကျနော်နဲ့ ပါးစပ်ချင်းစုပ်နမ်းနေတုန်း ကျနော့်လက်တွေက သူ့ခါးမှာ အတင်းကျပ်တုတ် ဝတ်ထားတဲ့ထမိန်ကို ကြိုးစားပန်းစားဖြည်ချနေရတယ်။
ဟဲဟဲသိတဲ့ အတိုင်းပဲလေ၊ ဒီလောက်ထန်ကြတာ ဘယ်ကြာလိမ့်မတုန်း ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်တုန်းလုံးနဲ့ အိပဲ့အိပဲ့ ဝါးကြမ်းခင်းပေါ်မှာလိမ့်နေကြပြီလေ။ ………………………………………………. မမြတ်မွန်ရဲ့ ကိုယ်လုံးကြီးက နေ့ခင်းအလင်းရောင်နဲ့ ဆိုတော့ဖွေးဖြူပြီး ဝင်းနေတာပဲဗျာ၊ ပေါင်လုံးကြီးတွေ ဖင်ကြီးတွေကလည်း တောင့်တောင့်တင်းတင်းနဲ့ ချောမွတ်ပြီး ကိုက်စားချင်စရာကြီးဗျ၊ နို့တွေကလည်း အနေတော်လေး၊ စို့လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ၊ ကျနော်က တော့ မအောင့်နိုင်တော့တာနဲ့ နူးတာနပ်တာတွေ လုပ်မနေတော့ဘူး လှေကြီးထိုးရိုးရိုးပဲ အရင်ဆော်ပစ်လိုက်တယ်၊ ဒါတောင်မှ ဝါးကြမ်းခင်းက အိတော့ ဆောင့်လို့ကောင်းတယ်ဗျား၊ ကိုယ်ကဆောင့်ချလိုက်၊ မမြတ်မွန်ရဲ့ ဖင်ကြီးက အိကနဲ အောက်ကဝါးကြမ်းပြင်ကို ဖိလိုက် ဝါးကြမ်းခင်းက သူ့ဖင်ကြီးကို ပြန်တွန်းလိုက်တော့ သူကလည်း အလိုက်သင့်ပြန်ကော့ပေး၊ ပြန်ကော့လာတဲ့ အဖုတ်ကို ကျနော်က ဖိဆောင့်လိုက်နဲ့၊ ဝါးကြောချင်း ခြစ်သံကလည်း တကျွီကျွီ နဲ့ ဆောင့်လိုက်တိုင်းမြည်၊ အားကောင်းလိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း၊ နောက်ပြီး ညတုန်းက သုံးချီဆွဲထားလို့ ကျနော့်ကောင်ကြီးက တော်တော်နဲ့ မပြီးချင်တော့ မမြတ်မွန်အတွက် ကောင်းဖို့ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ ပထမဆုံး ကျနော်တချီအပြီးမှာ သူနှစ်ခါလောက်ပြီးသွားတယ်။ တချီပြီးသွားတော့ ကျနော်တို့ အေးအေးဆေးဆေး နားနေကြတယ်၊
ကျနော်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းပေါ်မှာ မမြတ်မွန်က ခေါင်းအုံးအိပ်နေလို့ အားနေတဲ့ ညာဘက်လက်နဲ့ မှီသလောက်သူ့ကိုယ်လုံးကို နေရာ အနှံ့လျှောက်ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်၊ သူ့နို့သီးခေါင်းကို ကျနော့်လက်မ လက်ညိူးထိပ်နှစ်ခုနဲ့ ညှပ်ပြီးလိမ့်လိုက်တော့ သူအင့်ကနဲတွန့်သွားပြီး ကျနော့်လက်မောင်းကို လာဆိပ်တယ်၊ နောက်တော့ ကျနော့် နားရွက်ဖျားကို သူ့သွားလေးနဲ့ မနာတနာလာကိုက်တယ်၊ နားရွက်နဲ့ ဟိုကောင်ကြီးနဲ့က ဘယ်လိုအကြောချင်းဆက်နေသလဲတော့မသိဘူး၊ အဟီး၊ သူအကိုက်လိုက်မှာ ကျနော့်ကောင်ကြီးကလည်း ဖြောင်းကနဲခေါင်းပြန်ထထောင်လာတယ်၊ ကျနော့်ကောင်ကြီးက သူ့ပေါင်ကို သွားထောက်မိတော့ သူ့လက်ကချက်ခြင်းပဲ ကျနော့်ကောင်ကြီးဆီရောက်လာတယ်၊ မမြတ်မွန်ရဲ့ လက်ဖဝါးနုနုလေးတွေက ကျနော့်ကောင်ကြီးကို ဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်ပေးနေတော့၊ ကောင်ကြီးက ပိုဒေါသကြီးလာတယ်လေ။ …အမမြတ်မွန် လေးဘက်ထောက်ပေးဗျာနော်၊
ညတုန်းက အသံမြည်မှာစိုးလို့ မလုပ်လိုက်ရဘူး.. ..အိုကွာ..လင်းလင်းချင်းချင်းကြီး မလုပ်ချင်ပါဘူးရှက်စရာကြီး.. ..ဟာ အမကလည်းဗျာ၊ ဘယ်သူကမြင်မှာလည်းလို့.. ..မင်းမြင်မှာပေါ့ဟ.. ..ဟာအမကလည်း ဒီလောက်တောင်မှ ဖြစ်နေပြီဟာကိုနောက်နေတယ်သွားသွားမရဘူး အဟီးဟီး.. ကျနော်က မခိုင်းတော့ဘူး နောက်သလိုပြောင်သလိုနဲ့ အတင်းလုံးဖက်ပြီးသူ့ကို ရအောင်မှောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးမှ ပေါင်အရင်းကဆွဲမလိုက်တယ်၊ လေးဘက်ထောက်မဖြစ်ပေမဲ့ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်တော့ ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ အား၊ ဖင်ကြီးက ကားတက်လာလိုက်တာ၊ နောက်သူအဖုတ်ကြီးကလည်း အရည်တွေနဲ့ ရွမ်းလဲနေပြီး ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲက ပြူထွက်နေတယ်၊ အခုနတုန်းကမှ ကျနော် လရည်တွေပန်းထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူ်းဆိုရင် ကုန်းတောင်ရက်မိအုန်းမယ်၊ ခွိး။ ကျနော် သူ့ဖင်အနောက်နားမှာဒူးထောက်ရက်ကပဲ ကျနော့်ပြောင်းဖူးကြီးကို သူ့အဖုတ်ဝတေ့လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ဖြေးဖြေးချင်း တရစ်ချင်းဝင်သွားတာကို ဇိမ်ခံကြည့်ရင်း ထိုးသွင်းနေမိတယ်၊ အောက်က ညုသံလေးနဲ့ငြီးလိုက်တဲ့ မမြတ်မွန်ရဲ့ အသံက ကျနော့်ပြောင်းဖူးကြီးကို သံချောင်းကြီးလို ဖြစ်သွားစေတယ်၊ သူ့ပေါင်ရင်းနှစ်ဘက်ကိုကိုင်ရင်း အားရပါးရ ဆောင့်လိုက်တာ ဦးသာအေးရဲ့ တဲလေးကို လှုပ်ခါနေတော့တာပဲ၊ မမြတ်မွန်ဖင်ကြီးနဲ့ ကျနော့်ပေါင်ခြံရိုက်ခတ်သံကတောင် တဖတ်ဖတ်နဲ့ အကျယ်ကြီးလိုကြားနေရတယ်။ အရသာရှိလိုက်တာ ကောင်းလွန်းလို့ ဒီတခါလည်း ကျနော်ပြီးရော ဗိုက်ထဲကတောင် လိမ့်လိမ့်ပြီး တုန်နေအောင် လရည်တွေက တထုတ်ထုတ်ပန်းထည့်နေမိတော့တယ်၊
မမြတ်မွန်ကတော့ ဘယ်လိုပြီးလဲ ဘာလဲတောင် ကျနော် ဂရုမစိုက်မိတော့ဘူး၊ အဟီးဟီး၊ ကျနော် မမြတ်မွန့်ကျောဘက်ကနေဖက်ပြီး သူ့နို့ကြီးတွေကို နှယ်ဖတ်ရင်းနားနေလိုက်တယ်၊ သူ့အဖုတ်ထဲစိမ်ထားတဲ့ ကျနော့်ကောင်ကြီးလည်း တဖြေးဖြေးချင်းပျော့လာရာကနေ ပြွတ်ကနဲ ထွက်ကျလာတယ်၊ …ဟယ် မောင်ပေါ်ဦး တို့ ပေါင်တွေမှာလည်း အကုန်ပေကုန်ပြီ၊ ဘာနဲ့ သုတ်ရမလဲ ၊… ..လာအမ ဒီစဥ့်အိုးလေးကရေသန့်တွေ လာ၊အဲဒါနဲ့ဆေးလိုက်၊ ဟိုမှာ အုန်းမှုတ်ခွက်ရှိတယ်.. မမြတ်မွန်တယောက် ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး အုန်းမှုတ်ခွက်နဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကို ရေပက်ဆေးနေတာတွေ့ရတော့ အနောက်ကနေ ကျနော်ပြုံးမိတယ်၊ အကို့ ပင်တက်စ်ကင်မရာ ယူလာခဲ့ရင်တောင် ကောင်းမယ် ခွိး၊ အလှသိမ်းထားဖို့၊ လို့တွေးနေမိတာကိုးဗျ။
အဟီး အဲဒါကလည်း သူက ကျနော်ပြီးသွားပြီမှတ်ပြီး ဆေးနေတာဗျ၊ ခိခိ၊ ကျနော်က မပြန်ခင်နောက်တချီဆွဲအုန်းမယ်ဆိုတော့သူက အံသြနေတယ်၊ဟယ်နင်က လည်းလုပ်နိုင်လိုက်တာတဲ့၊ ကိုသန်းတိုး ဆိုရင် တပတ်တခါတောင်အနိုင်နိုင်ဆိုပဲ၊ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာကတော့ တွေးနေတာက တူမှ မတူပဲလေ၊ ခိခိ၊ ဟိုက ညားလာလို့အတူနေ့တိုင်းအိပ်နေရတာ ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ၊ နောက် ကျနော်က အသက်လည်း အများကြီးငယ်တယ်၊ ကိုယ့်မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူး၊ အဝေးကကြည့်ရင်းသွားရည်ကျနေ ရတာလည်းကြာတဲ့ စော်တောင့်တောင့်ကြီးကို ဖြုတ်ရတာကိုး၊ နောက်ဘယ်တော့မှ အခွင့်အရေးက ပြန်ရမလည်းမသိဘူးလေ၊ အဲတော့ ကြုံတုန်း အားမကုန်မခြင်း သုံးပြစ်လိုက်တာ အဟီး။
ကျနော်တို့ အဲဒီတဲက နေပြန်ထွက်လာတော့ မမြတ်မွန်ကတော့ မသိဘူး၊ ကျနော်ကတော့ ဒီနေရာတွေသွားလာနေတာမို့ ချက်ခြင်းသိလိုက်တယ်၊ တယောက်ယောက် ကျနော်တို့ကို လာချောင်းသွားပြီ ဆိုတာ၊ စောက်ပြဿနာပဲ ကျနော်လည်း အသံမကြားလိုက်ဘူး ဆိုတော့ ထူးတော့ထူးဆန်းတယ်၊ ပုံမှန်ဆိုရင် လူလာရင် အသံတခုခု တော့ကြားရမှာပဲ၊ အခုဟာကတော့ တမင်လာချောင်းသွားသလိုမျိုးပဲ၊ ခြေရာတွေက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး ၊ မမြတ်မွန် အလကားစိတ်တွေပူပြီး နောက်ကျနော့်ကို မပေးတော့မှာစိုးလို့ သူ့ရှေ့မှာတော့ ဘာမှ မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်တယ်၊ ခြေရာက တဲဘေးနားကနေ တာကိုကျော်ပြီး ဓနိပင်တွေဘက်ဖြတ်သွားတယ်။အင်း နောက်မှ စုံစမ်းကြည့်ရမယ်။
ကျနော် တော်တော့်ကို ထန်နေတယ်ဗျာ၊ ဟိုနေ့ညက သာဓုရမ်းလို့ သူ့မိန်းမ ဝင်းဝင်းကို အကို့အခန်းထဲ သွားဖွက်ထားလိုက်တယ်လို့၊ ဒေါ်ကြီးမထား ကပြောလိုက်တာကြားရတာနဲ့ ကို ကျနော့်မှာ ရင်တွေခုန်လာရတယ်လေ။ ဘယ်နှယ့်ဗျာ ဒီကုလားမလေး က ဒီလောက်တောင့်တာ၊ တင်ကလေး တွေက လုံးကျစ်နေပြီး လမ်းလျှောက်သွားရင် သူများဖင်ကြီးတွေလို၊ နိမ့်တုန်မြင့်တုန် လှုပ်၊ဘယ်ဘက်ရမ်း၊ ညာဘက်ရမ်း နဲ့သွားနေတာမျိုး မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ဆပ်ကနဲဆပ်ကနဲ တုန်သွားသလောက်ပဲ၊ မကိုင်ကြည့်ရပဲနဲ့ မာတင်းတင်းလေး နေမှာပဲ ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ တင်သားလေးတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ အနောက်ဘက်ကို ကောက်နေတာ တကယ့်နငယ်လေးလိုပဲ၊ အပေါ်မှာ ကျနော့်စီးကရက်ဗူးလေး ကပ်တင်ထားရင်တောင် မကျလောက်ဘူးထင်တယ်၊ အဟီး။ ဦးကြီးဆောင်၊ဒေါ်ကြီးမထားတို့က ကျနော်နဲ့က အကို့ရဲ့ အတွင်းလူ ကိုယ်ရံတော်တွေလိုဖြစ်နေတာလေ၊ ကျနော်နဲ့ဦးကြီးဆောင်က သောက်ဖက်၊ ဒေါ်ကြီးက ကျနော့်အတွက်ဆိုရင် ဟင်းတွေ စားစရာအကောင်းတွေဆိုရင်၊ ဖွက်ထားပေးတယ်၊ အကို့ကျတော့ ပေါ်တင်ပဲ ဖယ်ထားလို့ရတယ်၊ အေအီးအတွက်ဆိုရင်၊ ဘယ်သူမှ လည်း မထိရဲ ပြဿနာလည်းမရှာရဲဘူးလေ၊
ကျနော့်အတွက်ဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့သူတွေက ပူညံပူညံ လုပ်ကုန်ကြလိမ့်မယ်၊ အဟီး၊ ဆိုတော့ နားလည်မှုနဲ့ပေါ့၊ ဖွက်ထားပေးရင် ဒေါ်ကြီးတို့ အခန်းမှာပဲ သွားစားလိုက်တယ်၊ ကဲထားပါတော့ အဲဒါက အရေးမကြီးဘူး၊ ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ ကျနော်နဲ့ဦးကြီးဆောင်တို့ ရဲ့ဆက်ဆံရေးလေ၊ အဲဒါကျနော်က ဦးကြီးဆောင်နဲ့သောက်ကြတော့ အဲဒီညကအကြောင်းကိုမေးကြည့်တယ်။ …အဘ ..ဒေါ်ကြီးက ဘယ့်နှယ့် ဝင်းဝင်းကို အကို့အခန်းမှာသွားဖွက်ရတာလဲဗျ.. …ဟာ မင်းကလည်း အေအီးအခန်းကို ဘယ်သူက သွားရှာရဲမှာလည်းကွ အဲဒါကြောင့်ပါ.. .အဘ ကလည်း အချင်းချင်းတွေကို လာဖိန့်နေပြန်ပါပြီ ကျနော်မသိတာကျနေတာပဲ. .အဘမှာဒီလောက်ဂွင်တွေအများကြီး သာဓုရှာလို့မရအောင်ဖွက်ထားဖို့နေရာတွေ အများကြီးဟာကို.. ..ခိခိ မောင်ပေါ်ဦးရာ.နင်ဘယ်သူမှ လျှောက်မပြောနဲ့နော်၊ ငါတို့ အတွင်းလူချင်းမို့..နင့်ဒေါ်ကြီးက အေအီး ကိုသနားလို့တဲ့ စားရအောင်ခွင်ရိုက်ပေးလိုက်တာ… ..ဟာဘယ်လိုဘယ်လို ရှင်းပါအုန်းအဘ ကလည်း.. ..
နင်သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ နင့်ဒေါ်ကြီးက အေအီးကို သူ့တူလိုသားလိုပဲလေ၊ သိပ်ချစ်တာ..အေအီးက အလုပ်ကလည်း အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင်များပြီး၊ တော်ရုံတန်ရုံ ကောင်မလေးတွေဆိုလည်း သူ့ ရာထူးဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ငှဲ့နေရတာ၊ မထိမတို့၊ ဒါပေမဲ့ လူပျို ဆိုတော့ လိုမှာပဲလေ၊ အဟီး အဲဒါငါ့ကို သူတချိန်လုံး ပြောနေတာ၊ အေအီးကို သူလည်း မသိအောင် ငါတို့ခွင်ရိုက်ပေးရအောင်လို့ ခနခနပြောနေတာ၊ အဲဒီနေ့က သာဓုလည်းရမ်းရော နင့်ဒေါ်ကြီး က အေအီးခန်းလုံခြုံတယ်ဆိုပြီး ဂွင်ဝင်သွားတာပေါ့၊ .. ..အဲတော့..ဘာကြားလဲ အလုပ်ဖြစ်သွားလား.. ..အင်း နင့်ဒေါ်ကြီးက ပေါ်တင်တော့မေးလို့ မကောင်းတော့မသိမသာတော့ မေးပါတယ်. ဝင်းဝင်းအပြောအရတော့ ပထမ အေအီးက ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်အိပ်ပြီး ဝင်းဝင်းကို ကုတင်ပေါ်အိပ်ခိုင်းတယ်တဲ့၊ နောက် ဝင်းဝင်းက အတင်းခေါ်မှ ကုတင်ပေါ်ကိုလာ အိပ်တယ်ဆိုပဲ.. …အဲဒီတော့..ဟာ အဘကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အခန်းရောက်မှ အရက်ကမြိုရသေးတယ်၊
အမြီးကလည်း နောက်မှ ဝါးဗျ.တကထဲ.. ..ဟီးဟီး..ဝင်းဝင်းအပြောအရတော့ ဘာမှမဖြစ်ဖူး ပြောတာပဲ..ခွိ၊ ငါနဲ့သာနေရာချင်းလဲလိုက်ချင်တယ်ကွာ.. ..အေးဗျာ..ကျနော်လည်းဒီအတိုင်းပဲ.. အဲဒီကစပြီး ကျနော်ဝင်းဝင်းကို တင်းနေတာ၊ သူ့ကို မြင်လိုက်တိုင်း ရှေ့ကဖြစ်ဖြစ်၊ ဘေးကဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ကဖြစ်ဖြစ်၊ မြင်တာနဲ့ကို လီးတောင်နေပြီ၊ တောက်၊ မမြတ်မွန်ကလည်း သိပ်လွယ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုသန်းတိုး ပြန်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း အခြေအနေက မပေးတော့ဘူး၊ ကောင်းတာတော့ ကောင်းတယ်ဗျ ဒီကောင်မကြီးကလည်း၊ ဒါပေမဲ့ စားရမှာနဲ့ အန္တရာယ်နဲ့က သိပ်မတန်တော့ လက်ရှောင်ထားတယ်၊ လစ်ရင်တော့ လုပ်မှာပေါ့ဗျာ၊ အဟီး။ ဝင်းဝင်းကိစ္စကလည်း အန္တရာယ်က တမျိုးဗျ၊ သာဓုနဲ့ ကျနော်နဲ့ကလည်း နဂိုထဲက ကြည်တာမဟုတ်ဘူး၊ သူကလည်းကျနော့်ကို အေအီး အတွင်းလူဆိုပြီး သိပ်ကြည့်မရဘူး၊ နောက်ဒီကောင်က မူးလာရင်သွေးဆိုတယ်၊ ကြောက်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရန်ဖက်မဖြစ်ချင်လို့ပါ။ ဝင်းဝင်း ကို ကျနော်ဝင်လုံးတော့ သာဓုမသိအောင်ပေါ့၊ အဟီး၊ ဝင်းဝင်းလည်း သာဓုကိုချစ်လို့ယူထားတာမှ မဟုတ်တာ အသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာဆိုတော့ ကျနော်တို့လို လူပျိုပေါက်ကလေးတွေ နဲ့ကသူလည်း နေရတာပျော်တာပဲလေ၊
ကျနော်က ဝင်းဝင်းနားထောင်ချင်တဲ့သီချင်းကက်ဆက်ခွေလေးတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းစာစောင်လေးတွေ မြို့တက်ရင်အမှတ်တရ ယူယူလာပေးပြီး ကျနော်ပေးတယ် လို့ဘယ်သူမှ မပြောနဲ့နော်ဆိုပြီး လျို့ဝှက်ပေးတော့ တဖြည်းဖြည်း ပိုရင်းနှီးလာ တာပေါ့။ တညနေ ဆိုက်ကပြန်လာပြီးတော့ ကိုယ့်အခန်းထဲမှာ အရက်ပြတ်နေတာနဲ့ ဦးကြီးဆောင်အခန်း ဘက်သွားတော့ တံခါးပိတ်ထားတာနဲ့ နံရံကိုပုတ်လိုက်တော့ ဒေါ်ကြီး ကတံခါးကိုအသာဟ လို့ကြည့်တယ်၊ နောက်ကျနော်မှန်းသိသွားတော့ မှ အသာဖွင့်ပေးတယ်၊ အထဲမှာတော့ ကြမ်းပေါ်မှာ ဝင်းဝင်းတယောက်ထိုင်လို့ခေါင်းငုံပြီး မျက်ရည်သုတ်နေတာတွေ့ရတယ်၊
ဒေါ်ကြီးလက်ထဲမှာလဲ သဘက်အသေးလေးတထည်နဲ့၊ …ဟင်..ဘာဖြစ်နေတာလဲ ဒေါ်ကြီး.. ..မောင်ပေါ်ဦးလာတာနဲ့ အတော်ပဲ၊ ဒီမှာလေ၊ သာဓုတကောင် ရုံးချူပ်က ရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေသွားယူခါနီး ဝင်းဝင်းနဲ့ စကားများလို့မျက်နှာကိုထိုးထားတာ၊.. ..တောက်..ဒီကောင်မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ.. ..အင်း အခုတော့သူတို့လှေထွက်သွားပါပြီ၊ ဒေါ်ကြီး၊ ဝင်းဝင်းမျက်နှာကို ကျပ်ပူထိုးပေးနေတာ. ..အော်ဖြစ်မှ ဖြစ်မှလေ အဘရော ဒေါ်ကြီး.. …ကိုသန်းတိုးတို့ သာဓုတို့နဲ့လိုက်သွားတယ်လေ…ခု မီးဖိုမှာ ထမင်းမစားရသေးတဲ့သူတွေ ရှိသေးတယ် ဒေါ်ကြီးသွားပြင်ပေးရအုန်းမယ်၊ မောင်ပေါ်ဦး အဝင်းကို ခနကြည့်ပေးထားမလား.. .ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်ကြီးအေးဆေးသာသွား၊ ကျနော်အလုပ်မရှိတော့ဘူး အားပြီ.. …အေးအေး တံခါးကို အထဲကသာဂလန့်ချထားလိုက်တော့ အဝင်းက ရှက်လို့ဘယ်သူ့မှ မတွေ့စေချင်ဘူး.. ..စိတ်ချဒေါ်ကြီး သွားသွား.. ဒေါ်ကြီးမထား ထွက်သွားတာနဲ့အခန်းတံခါးကို အထဲကဂျက်ချလိုက်ပြီး ကျနော့်ကို ပေးခဲ့တဲ့တာဝါလေးကို ရေနွေးဇလုံထဲနှစ် ရေပြန်ညှစ်ချရင်း ..ကဲ ဝင်းဝင်း မော့ မျက်နှာကို နည်းနည်းကြပ်ပူလေးထိုးပေးရအောင်… ..ရတယ်ကိုပေါ်ဦး ဝင်းဘာ့သာလုပ်ပါ့မယ်.. ..
အိုဖြစ်ရလေ ဝင်းရယ်မျက်စေ့ကို မထိမိတာကံကောင်း..ဒီကောင်သိပ်လွန်လာပြီ သူများသားသမီးကို အဲလို.. .ရှိပါစေတော့ ကိုပေါ်ဦးရယ် အဝင်းရဲ့ကံပါပဲ.. .အိုကွာ..ကိုအဝင်းကို အရမ်းသနားတာပဲ..အဝင်း ကိုနဲ့ဘာလို့အရင်မတွေ့တာလည်းကွာ….. ဝင်းဝင်းရဲ့ အညိုအမဲစွဲနေတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကြည့်ပြီး ကျနော့်ပါးစပ်က အလိုလိုထွက်သွားတာပါ၊ တကယ်တွေ့ခဲ့ရင်တော့ ဘာလုပ်မှာလည်း မေးရင်ကိုယ်လည်းမဖြေတတ်ပါဘူး၊ အဟီး၊ ကျနော့်ကိုမော့်ကြည့်လိုက်တဲ့ ဝင်းဝင်းရဲ့ မျက်လုံးရွဲကြီးတွေတွေ့တော့ ကျနော်စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ဝင်းဝင်းမျက်နှာလေးကို ကိုင်ပြီး နူတ်ခမ်းထူလုံးလုံးလေးကို ကျနော့်နူတ်ခမ်းအစုံနဲ့ဖိကပ်ပြီးနမ်းလိုက်တယ်၊ ကျနော့်လက်တွေက ဝင်းဝင်းကိုယ်လုံးလေးကို သိုင်းဖက်မိလိုက်သလို၊ ဝင်းဝင်းရဲ့ နူတ်ခမ်းအစုံကလည်း ပွင့်အာလာပြီး ကျနော့် အနမ်းတွေကို ပြန်တုန့်ပြန်လာတယ်၊ ကျနော်က ဝင်းဝင်းကို တင်းတင်းလေးဖက်ရင်းက သူထိုင်နေတဲ့ဖျာပေါ်မှာပဲ အသာဆွဲလှဲလိုက်တယ်၊ ဝင်းဝင်းနဲ့ ကျနော်ဖက်ရက် ဘေးတိုက်လေး ကြမ်းပြင်ပေါ်လှဲကျ သွားကြတယ်။
ဝင်းဝင်းက နောက်တော့သတိပြန်လည်လာသလိုနဲ့ ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို သူ့လက်ဖနှောင့်လေးနဲ့တွန်းရင်း၊ …အကို ကိုပေါ်ဦး မကောင်းဘူးထင်တယ်နော်.. ကျနော် ဘာမှ မဖြေတော့ပါဘူး ဝင်းဝင်းရဲ့ နူတ်ခမ်းထူထူလုံးလုံးလေးကို ချိုချဉ်စုပ်သလို တအားဖိစုပ်ရင်း လက်တွေက တချိန်လုံးကိုင်ချင်နေခဲ့တဲ့ ဝင်းဝင်းရဲ့ တင်သားလုံးလုံးလေး တွေကို ဆုပ်နှယ်နေမိပါတော့တယ်၊ ..အီး.အိုး..ကိုပေါ်ဦးရယ်… ဝင်းဝင်းရဲ့ ထမိန်တွေပြေလျှော့သွားတဲ့အချိန်မှာ ဝင်းဝင်း ထမိန်အောက်မှာအတွင်းခံမပါပဲ အမွေးပြောင်နေတဲ့ အဖုတ်လေးကိုပဲ တွေ့လိုက်ရပါတယ်၊ ကျနော်လည်း ကိုယ့်ပုဆိုးကိုယ်ကန်ချွတ်ရင်း၊ ဝင်းဝင်းလေးကို ပက်လက်ဖြစ်အောင်အသာတွန်းလှဲပြီး ကျနော်က သူ့ကိုယ်ပေါ်ကပဲ၊ သူ့ပေါင်လုံးနှစ်လုံးကြားမှာ နေရာယူလိုက်ပါတယ်၊ အရည်လေးစို့နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဝင်းဝင်းရဲ့ အဖုတ်ဝလေးမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ကောင်ကြီးရဲ့ ခေါင်းကို လက်နဲ့ကိုင်တေ့ရင်း ဖြေးဖြေးချင်း ဖိသွင်းချလိုက်ပါတော့တယ်၊ …အား… …အီး… ကျနော်အသံတိုးတိုး လေးနဲ့တောင်ငြီးမိပါတယ်၊ ကောင်းလိုက်တယ့် စောက်ဖုတ်လေး၊ စေးပြီး နူးညံ့နွေးထွေးနေတာပဲ လို့ တွေးနေမိတယ်၊ အပျိုပေါက်စနမလေးကို သွင်းရသလိုအရမ်းကျပ်နေတာ မဟုတ်ပေမဲ့ စေးပြီး ကျနော့်ကောင်ကြီးတချောင်းလုံးကို ဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်ထားသလိုခံစားနေရာတာ အရမ်းကို ကောင်းမှကောင်းပါပဲ၊ ကျနော်လည်း ဝင်းဝင်းရဲ့ ပေါင်လုံးနှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အသာမလို့ စပြီး တဖြေးဖြေး အရှိန်ယူလို့ စဆောင့်နေမိပါတော့တယ်။
ကျနော်လည်းပြီး ဝင်းဝင်းလည်းပြီးသွားတယ်ထင်တယ် ကျနော့်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားလို့၊ သူ့ခေါင်းလေးကိုတော့ ကျနော့်ပုခုံးပေါ်မှာဖွက်ထားသေးတယ်၊ ကျနော့်ကောင်ကြီး တဖြွတ်ဖြွတ်နဲ့ ဝင်းဝင်းစောက်ခေါင်းထဲ ပန်းထုတ်နေတာရပ်သွားပြီး တဖြေးဖြေးချင်း ပျော့သွားတော့မှ၊ ဝင်းဝင်းက ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို အသာလေးတွန်းလွှတ်ရင်း၊ ..ကိုပေါ်ဦး ဖယ်ပါတော့ ဒေါ်ကြီးပြန်လာတော့မယ်တော်ကြာ.. ကျနော်လည်းအသာလေးဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး လုံချည်နဲ့ ကောက်ဝတ်လိုက်တယ်၊ ဝင်းဝင်းကတော့ ကမန်းကတမ်းသူ့ထမိန်လေးကို ဆွဲမပြီးပေါင်ခွဆုံကို ထမိန်နဲ့ အသာဖိသုတ်နေတယ်။ ..အဝင်းငါနင့်ကို တကယ်သနားတယ်ဟာ၊ အဲဒီခွေးမသားကို ပုံစံပေးပစ်ချင်တာ.. ..အင်း ကိုပေါ်ဦးသနားတာ ကျမလက်တွေ့ယုံသွားပါပြီရှင်… ဝင်းဝင်းရဲ့ နောက်တိနောက်တဲ့ မျက်နှာပေးကြောင့် ကျနော် တောင် တဟားဟားရီမောမိပါတယ်။
..အေးဟာ ငါထပ်သနားချင်သေးတယ်၊ ဒီညလာခဲ့မယ်ဟာ နင်တို့အခန်းကို၊ သူတို့ပစ္စည်းသွားတင်တာက မနက်ဖြန်လောက်မှ ရောက်မှာနောက်ရုံးချူပ်က အင်ဂျင်နီယာတွေကိုလည်း လေယာဉ်စောင့်ကြိုရအုန်းမှာ ဆိုတော့ မနက်ဖြန်တောင်မိုးချူပ်မှ ရောက်မှာ…. ….ဟင့်အင်း ကိုပေါ်ဦးမလာခဲ့နဲ့ ကိုသာဓုက သူ့လူတွေ ဒလျှိုချထားတာရှိတယ်၊ ကိုပေါ်ဦးသာ ကျမတို့အခန်းညဘက်ဝင်သွားတယ် သာကိုသာဓုကြားလိုက်လို့ကတော့ မိုးမီးလောင်ပြီပဲ…. ..အင်း အဲဒါဆိုလည်း ငါ့အခန်းလာခဲ့ဟာ .. အဲဒါလည်းအတူတူ ပဲလေ၊ သိသွားလို့ကတော့ အဝင်းကို သူသတ်တောင်သတ်ပစ်မလားမသိပါဘူး…. ကျနော့်ခေါင်းထဲမှာ မမြတ်မွန်ကို ခေါ်သွားခဲ့တဲ့တဲကိုပဲ သတိရလိုက်မိတယ်၊ အင်းလေ အဲဒီနေရာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက မနက်ဖြန်မှ၊ ဒီညအတွက်က ဟော၊ ကိုသန်းတိုးလည်း မရှိဘူးပဲ၊ မမြတ်မွန်အခန်းကို ဒီညသွားမှပဲ၊ အဟီး၊ ပေါ်ဦးတို့များကောင်းစားနေလိုက်တာ။ခိခိ။ မမြတ်မွန်ကို ၂ချီပဲ ဆွဲလိုက်တယ်၊ စိတ်က ဝင်းဝင်းနဲ့ မနက်ဖြန် လယ်တဲမှာ ကောင်းကောင်းမဆွဲနိုင်မှာစိုးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချွေတာလိုက်တာ၊ မမြတ်မွန်ကတော့ ကြိတ်တိုးလေး ပြောပါတယ်၊ ..ပေါ်ဦးရယ် နင်ကလည်း လောလိုက်တာ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာတုန်း၊ မနက်အစောကြီးကျမှ ထပြန်ရင်ရသားနဲ့ဟာကို… ..ဟာအမကလည်း စခန်းက တယောက်ယောက်မြင်သွားရင် ပြဿနာအကြီးအကျယ်တက်မှာ၊ အကိုကလည်းကျနော့်ကို မျက်နှာသာပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူး၊ ၊အမအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူး၊
ကျနော်လည်းမနက်အစောကြီးအလုပ်ရှိသေးလို့ပါ… ..ဟဲ့ မနက်ဖြန်နေ့ခင်း ဟိုလယ်တဲလေးရော အားတယ်မဟုတ်လား… ..အော်အမ ဦးသာအေးတို့ အခုပြန်ရောက်နေတယ်၊ နောက် လစ်ရင် ကျနော်ပြောမယ်စိတ်ချ..အမမြတ်မွန်ကို ကျနော်ချစ်လို့မဝနိုင်သေးပါဘူး၊ဗျာ ဟဲဟဲ… အဲလိုလေး ချွေးသိပ်ထားခဲ့ရသေးတယ်ဗျ၊ အဟီး။ နောက်နေ့ တော့ ဝင်းဝင်းကို ရွာထဲသူ့ဘာသူသွားရင်း ဦးသာအေးတို့တဲနားကိုလာခဲ့ဖို့မှာခဲ့တယ်၊ သူကတော့သိပါတယ်၊ ဦးသာအေးသမီးတွေနဲ့လည်းခင်နေတာကိုး၊ မမြတ်မွန်ဆီကပြန်လာတာနဲ့ လစ်ပိုချ၊ ကောင်းကောင်းအိပ်ပြစ်လိုက်တာ မနက်ကျတော့ အားတော်တော်ပြည့်နေပြီ၊ ဒါပေမဲ့ လိုရမယ်ရ ၊မြို့သွားတုန်းက ဝယ်ထားတဲ့ကွမ်းယာဆိုင်က အားဆေး အထုပ်လေးတွေ ဝယ်ထားတာ၊ ဘာဆေးတွေမှန်းတော့မသိပါဘူး၊ အတောင့်တွေရောအလုံးတွေရော လေးငါးခြောက်မျိုးရောပြီး ပလပ်စတစ်နဲ့ထုပ်ထားတဲ့ဟာ ဘောင်းဘီအိပ်ထဲ ထိုးထဲ့လာခဲ့လိုက်တယ်။ နေ့လည်ထမင်းစားချိန် စခန်းကို ပြန်မလာဘူးလို့ အကို့ကိုကြိုပြောထားလိုက်လို့ အေးဆေးပဲ ကိုစောဖေတို့ လယ်တဲမှာ ရှိတဲ့ဟာနဲ့ ဝင်စားပြစ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ဟိုအားဆေးထုပ်လေးကို အကုန်သောက်ပစ် လိုက်တယ်၊ ပြီးမှ ဦးသာအေး လယ်တဲကို တယောက်ထဲ ညှောင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။
ဝင်းဝင်းလေးက ရောက်တောင်နေပြီ လယ်တဲထဲမှာ၊ မျက်နှာလေးကတော့ ရှက်ကို့ရှက်ကန်းဖြစ်နေသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လှေကြီးထိုးတချီ ဆွဲပြီးတော့ အရှက်ကုန်သွားတော့တာပါပဲ၊ အခု မှပဲ သူ့နို့ကြီးတွေလည်း မြင်ရတော့တယ်၊ သူ့နို့တွေက လုံးနေတာ အုန်းသီးအခွံနွာထားသလိုပဲ နောက်တင်းနေတာပဲ၊ နို့သီးခေါင်းညိုညိုတွေက အသားညိုညိုပေါ်မှာ ဆိုတော့ပြာနှမ်းနေသလိုပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ခလေးမမွေးဘူးသေးလို့လား မသိဘူး သိပ်အလုံးမကြီးသေးဘူး၊ စို့လို့ကောင်းမှကောင်း အနေတော်ပဲ၊ ပေါင်လုံးလေးတွေကလည်း လုံးတစ်ပြီး အိတုံနေတာပဲ၊ ဘယ်ရမလည်း ဒုတိယအချီကိုတော့ ကိုယ်အရမ်းလုပ်ချင်နေတဲ့ ဒေါ့ကီကို မရရအောင် ဆွဲပစ်လိုက်တယ်၊ နှစ်ချီပြီးသွားတော့ သူလည်းမော၊ ကျနော်လည်းနည်းနည်းတော့ အိပ်ငိုက်လာတယ်၊ ထမင်းစားပြီး နှစ် ဖြစ်သွားတာကိုး၊ ဒါပေမဲ့ မဝသေးတော့ ထမိန်အင်္ကျီပြန်ဝတ်ပြီး သူ့ကိုယ်လုံးလုံးလေးကို အနောက်က ဖက်ရင်း ပုဇွန်ထုတ်ကွေးလေးကွေး နားနေလိုက်တယ်။
သူ့ဖင်လုံးလုံးကောက်ကောက်လေးက ကျနော့်ပေါင်ခြံကိုလာထိနေတာတင်းအိနေပေမဲ့၊ အခုတင် နှစ်ချီပြီးထားတော့ ညီတော်မောင်က မထနိုင်သေးဘူးလေ၊ ကျနော့်လက်က သူ့ဂျိုင်းအောက်က လျှိုပြီး အခုနက ကျနော်အဝစို့ထားခဲ့တဲ့ နို့အုံကြီးတွေကို အရသာခံဆုပ်နှယ်ပေးနေလိုက်တယ်။ ..ဒါနဲ့ အဝင်း ကိုမေးစရာရှိလို့ ဟိုနေ့က အေအီးအခန်းမှာ ကုတင်တခုထဲ အတူတူအိပ်ပြီး ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆို… ..ခစ်ခစ်..ကိုပေါ်ဦးကို ဘယ်သူပြောလဲ… …ဒေါ်ကြီးပြောတာပဲလေ…ငါကတော့ မယုံနိုင်ပါဘူး၊ ဒီလောက်ဖင်ကောင်း၊ နို့ကြီး၊ နဲ့ ချစ်စရာ ကုလားမလေးကို တကုတင်ထဲ အတူတူအိပ်ပြီး ဘာမှ မလုပ်ဘူး ဆိုတော့၊ ယောက်ျား အစစ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တွေးစရာကြီးပေါ့.. ကျနော် တမင်အစ်လိုက်တာပါ၊ ကျနော်နဲ့ အကိုနဲ့ ဖာဘိလည်းအတူသွားဖူး၊ ကောင်မတွေလည်းခေါ်ပြီး လုပ်ဖူးနေတော့ အကိုက ဂန်ဒူးမဟုတ်တာကတော့ ကျနော့်လောက်ဘယ်သူမှ သိမှာမဟုတ်ဘူးလေ။
..ခစ်ခစ်..ကိုပေါ်ဦး ဘယ်သူမှ မပြောရဘူးနော်..ဒေါ်ကြီးကိုတောင်မပြောနဲ့.. ..အေးပါဟ၊ နင်နဲ့ငါ ဒီအဆင့်တောင်ရောက်နေမှပဲ နင်ကလည်း.. …ကိုပေါ်ဦး ဆရာက ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူး၊ လုပ်တော့လုပ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဟိုအထဲကို မထည့်ဘူး… ..ဟဲ့ဘယ်အထဲကို မထည့်ပဲဘာလုပ်တာလည်းဟ၊ နင်ကလည်း ရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါ.. ..ဒီလိုလေ.အခု ကိုပေါ်ဦးနဲ့ ဝင်း အိပ်သလိုပဲ၊ အေအီးက ဝင်းအနောက်ကလေ၊ နောက်တော့ ဝင်းရဲ့ ထမိန်ကိုခါးပေါ်အထိလှန်လိုက်တယ်၊ ဝင်းက သူအနောက်က သူ့ဟာကြီးနဲ့ ဝင်းဖင်ကိုထောက်နေကတဲက ရင်ခုံနေတာ၊ ခစ်ခစ်၊ နောက် ဝင်းထမိန်က ခါးပေါ်ရောက်သွားတော့ သူ့ဟာကြီးက ပူနွေးနွေးကြီး ဝင်းပေါင်နှစ်လုံးကြား ကိုဝင်လာတယ်… ..အော် ဒါမျိုးလေးလား…. ကျနော့်ကောင်ကြီးက ဝင်းဝင်း ဇာတ်ကြောင်းပြန်တာကို နားထောင်ရင်းနဲ့ တဖြေးဖြေးမာကျောလာတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဝင်းဝင်းပြောသလိုပဲ သူ့ထမိန်ကို သူ့ဖင်ကောက်ကောက်လေးကျော်လို့ ခါးအထိ လှန်တင်လိုက်တယ်။
ကျနော့်ပုဆိုးကိုလည်းဖြည်ချလိုက်တော့ မာကြောလာတဲ့ အကောင်ကြီးက ဝင်းဝင်းရဲ့ ပေါင်လုံးတုတ်တုတ်လေးနှစ်လုံးကြားကိုတိုးဝင်သွားတယ်။ ….ဟုတ်တယ်..အဲဒါမျိုးလေးပဲ..ဝင်းက အဲဒီအချိန်မှာ စိတ်ထနေပီဆိုတော့ အရည်ရွှဲနေပြီပေါ့နော်. .အခုလိုပဲလေ.ခစ်ခစ်.. ကောင်မလေးလည်း ကျနော့်ကို ဇာတ်ကြောင်းပြန်ရင်း စိတ်ပြန်ထလာပြီထင်တယ် အရည်တွေရွဲလာတယ်၊ အခုနတုန်းက ကျနော်ထုတ်ထားတဲ့လရည်တွေနဲ့ပါဆိုတော့ ပေါင်ခွဆုံတခုလုံးကလည်း ခွှဲကျိကျိနဲ့ပေါ့။ ကျနော့်ကောင်ကြီးမှာပါ အရည်လာလူးသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ..အဲလို စိုနေတော့ ဝင်းရဲ့ပေါင်လုံးနှစ်ခုကြားမှာပဲ ဝင်ထွက်လုပ်နေတယ်.. ..အော် ဒါမျိုးလေးလား.. ပြောရင်းဆိုရင်း ကျနော်လည်း ဝင်းဝင်းရဲ့ ခါးကျင်ကျင်လေးကို ဆွဲယူလို့ ကျနော့်ဖင်ကိုကော့ရင်း ၊ဝင်းဝင်းရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားကို ရှေ့တို့နောက်ဆုပ်လုပ်နေမိတယ်။
…အင်း..ဒါပေမဲ့ အေအီးက တချက်တချက်မှာ ဝင်းရဲ့ ဟိုအပေါက်လေးကို လာလာထိုးတယ် အထဲထိတော့ ဟုတ်ပါဘူး… ..ဟင်..ဘယ်အပေါက်လေးလဲ..အရှေ့ပေါက်လား… ..အို ..ရှေ့ပေါက်ဆို စကားလုပ်ပြောနေမလား.. ကျနော့်ရင်တွေတောင် တဒိတ်ဒိတ်ခုန်လာတယ်၊ ကျနော်တို့ ဆော်ပင့်လာလို့ ဖင်ကောင်းကောင်း နဲ့ စော်ပါလာရင် အကိုတခါတလေ လုပ်တတ်တယ် ဆိုတာကျနော်သိတယ်လေ၊ ဝင်းဝင်းကိုများ.. …ဒီလိုလေးလား… ကျနော် ဖင်ကိုအနောက်အသာလေးကော့ပြီး ကျနော့်ကောင်ကြီးထိပ်ကို ဝင်းဝင်းခရေပွင့်လေးဆီ ထိုးဆွလိုက်တယ်၊ ..အင်း..နည်းနည်းလေးတော့တွန်းတယ်.. ..အဲလောက်လား… ..အင်း… မရတော့ဘူး၊ ကျနော်အရမ်းစိတ်ကြွလာပြီ၊ ဝင်းဝင်းကိုတော့ နောက်ပေါက်ဖွင့်မှရတော့မယ်၊ ကျနော့်ကောင်ကြီးထိပ်မှာအရည်တွေ စိုနေပေမဲ့ နည်းနည်းစေးကပ်နေပြီ သိပ်မလွယ်တော့။ လက်ထဲကိုပဲ တံတွေးများများထွေးထည့်ပြီး ကျနော့်ငှက်ပျောဖူးပေါ်လိမ်းလိုက်တယ်၊ နောက်တော့ ဝင်းဝင်းရဲ့ ခလေပွင့်လေးကိုတေ့ပြီး အသာလေးဖိထိုးလိုက်တယ်၊ …အား…. ဝင်းဝင်းရဲ့ ငြီးသံလေးထွက်လာတယ်၊ နည်းနည်းဖိထိုးလိုက်တော့ကွမ်းသီးလုံးဝင်သွားတယ်၊ ဝင်းဝင်းလက်တွေက နောက်ပြန်နဲ့ကျနော့်ဗိုက်ကို လာတွန်းတယ်။
..အား.ကိုပေါ်ဦး..အဲလောက်ပဲ..အဲလောက်ပဲ…. အကိုက အဲလောက်နဲ့ကျေနပ်နိူင်ပေမဲ့ကျနော်က မရတော့ဘူး၊ ကျနော့်ခေါင်းလေးကိုပဲ တံတွေးထပ်စွပ်လိုက်၊ ကွမ်းသီးလုံးလေး စိမ်လိုက်လုပ်ရင်းက လက်တဖက်နဲ့ ဝင်းဝင်းရဲ့ စောက်စေ့လေးကို သွားကလိနေလိုက်တယ်၊ ဝင်းဝင်းက သူ့စောက်စေ့လေးကို ကလိတာမခံနိုင်လို့ ဖင်ရမ်းပြီး အနောက်ကို ယောင်အကော့ ကျနော်လည်း ကျနော့်ကောင်ကြီးကို ဖိသွင်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်၊ ..အား.ကိုပေါ်ဦး…နာတယ်….အီးးးးးး…. ဝင်းဝင်းအော်သံနဲ့ ကျနော်လည်း ခုနစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နူံးလောက်ဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ကောင်ကြီးကို ခနရပ်ထားလိုက်ရပါတယ်၊ တဖက်နို့သီးခေါင်း တဖက်ကစောက်စိ၊ ပါးစပ်ကသူ့ဂုတ်သားလေးကို ကိုက်လိုက်ရက်လိုက် လုပ်ပေးရင်း နည်းနည်းလေး ကိုယ်ခနွာပျော့သွားမှ အသာလေးဖိသွင်းလိုက် ဆွဲထုတ်လိုက်လုပ်လာခဲ့တာ၊ မကြာခင်ပဲ၊ ဝင်းဝင်းရဲ့ ဖင်လုံကျစ်ကျစ်တင်းတင်းလေးနဲ့ ကျနော့်ပေါင်ခြံ ဖိပြားကပ်သွားတဲ့အထိကို ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်၊ အဆုံးဝင်သွားတော့ ကျနော့်လိင်တန်အရင်းမှာ သားရည်ကွင်းနဲ့ ညှစ်သလိုခံစားနေရတာကို အရသာခံရင်းနဲ့ ဝင်းဝင်းလေးရဲ့ ငြီးသံလေးက ဖီလင်သံလေး ဖြစ်လာတဲ့အထိစောင့်ပြီးမှ အဝင်အထွက်စလုပ်ပေးမိပါတော့တယ်၊
အခုတခေါက်က အရမ်းကျပ်နေပေမဲ့ တတိယအချီမြှောက်ဆိုတော့တော်တော်နဲ့မပြီးပါဘူး၊ ဝင်းဝင်းရဲ့ ခရေပွင့်လေးထဲ ကျနော့်ပြောင်းဖူးထိုးထားရင်းနဲ့ပဲ သူ့ကို ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပုံစံပြောင်းခိုင်းလိုက်ပြီး တံတွေးတွေထပ်ထွေးချရပါတယ်၊ နောက်ဝင်းဝင်းလည်းအသားကျသွားလား မသိ ဖင်ကြီးရမ်းရမ်းကော့ပေး ကျနော်လည်း မုဆိုးဒူးထောက်ကနေ တဖုန်းဖုန်း ဖိချနေရာကနေ ကျနော့်ကောင်ကြီး ပူထူပြီး ထိပ်က မီးတောင်ပေါက်ကွဲသလိုပွင့်ထွက်ပြီး ချော်ရည်တွေ ဝင်းဝင်း ကိုယ်ထဲ ပန်ုးထုတ်ပြစ်လိုက်ရပါတော့တယ်။
…ကောင်းလိုက်တာ အဝင်းရယ်၊ ဒါနဲ့များ အကိုက အထဲထိမသွင်းဘူး၊ အဟီးဟီး… ..အင်း..သူက ဘာကြောက်နေလဲမသိပါဘူး၊သူ့ကွမ်းသီး လုံးပဲ စိမ်ပြီး ထုတ်လိုက်တယ် ခစ်ခစ်..ဝင်းက တော့ ကိုးလို့ကန့်လန့် ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ကျန်ခဲ့တာပေါ့၊ခစ်ခစ်.. …အခု တော့ ကျေနပ်တယ်မဟုတ်လား ငါလုပ်ပေးတာ၊ အဟီး.. ..တော်ပါ..နာနေတယ်အခု၊ အတင်းမညှာမတာလုပ်တာပဲ.. ဒီကုလားမလေး တော်တော် ညုတတ်တာပဲ၊ ဒီအပြောအဆိုလေး၊ မျက်စလေးတွေ ကြောင့်စိတ်က ပြန်ကြွလာပြန်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဟိုကောင်က ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ ရယ်ဒီမဖြစ်သေးဘူး၊ ..မဟုတ်ပါဘူးဟာ နင်က မိုက်လွန်းတော့ စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ပါ၊ သွားသွား ရေဆေးချင်သွားဆေးလိုက်အုန်း၊ ဟိုစဥ့်အိုးဘေးမှာ.. ..အင်း..အင်း..ဆေးလိုက်အုန်းမယ် လူလည်း သူလုပ်ထားတာပေပွနေပြီ တခါထဲ.. ဝင်းဝင်းက ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ထပြီး ရေသွားဆေးမလို့၊ ထမိန်လေးဆွဲလို့ခေါင်းကစွပ်ပြီး ရင်လျှားလိုက်တုန်း၊ အသံလေးတခု ကျနော်ကြားလိုက်ရတယ်၊ ပထမ မမြတ်မွန်နဲ့တုန်းက ဟာကို ပြန်တွေးမိပြီး ကမန်းကတန်း ဝါးထရံအပေါက်ကနေ အပြင်ကို ကပ်ချောင်းလိုက်တော့ တာရိုးကိုကျော်ပြီး အမြန်လစ်သွားတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ ကျောပြင်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်၊
အင်္ကျီအဝတ်အစားနဲ့ ဦးထုတ် အရောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတာနဲ့ ဦးကြီးဆောင်မှန်း ချက်ခြင်းသိလိုက်ပါတယ်။ ဟိုက် ဟိုတခါတုန်းကလည်း ဒီလူကြီးပဲ လား၊ နောက်မှ ပြန်မေးတော့မယ်လို့စိတ်ထဲ တေးထားလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နားနားနေနေ နပ်ပြီး နောက်ထပ် တချီ တပေါင်ကျော်လေး ဆွဲပြီး မှ ဝင်းဝင်းလည်း စခန်းဘက်ကို ပြန်သွား ကျနော်လည်း အလုပ်သမားတွေ အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာကို ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ညနေဘက်ကြတော့ စခန်းမှာ ကိုသန်းတိုးနဲ့ သာဓုတို့ပြန်ရောက်နေကြပြီးသူတို့ နဲ့အတူရုံးချူပ်က လူကြီးတွေ ပါလာကြတာတွေ့ရပါတယ်၊ စခန်းက ဧည့်ခန်းဆောင်မှာ အကိုတို့ စကားပြောသံကြားနေလို့ ကျနော်ဝင်သွားတော့ ၊ ရုံးချူပ်က အင်ဂျင်နီယာ ဒေါ်မျိုးမမ တို့နဲ့ တွေ့ရပါတယ်၊ ကျနော်နဲ့ သိတော့သိပြီး သိပ်မခင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေလည်းပါပါတယ်၊ မမာလာဖြိုးက အကိုနဲ့ စိမ်းဘက်ရ်ှလို့ဆိုပါတယ်၊ ကိုမောင်ဟန်ကတော့ အကိုတို့ထက် နှစ်နှစ်လောက်ငယ် တယ်ဆိုလား၊ သူတို့ ကျောင်းကလူတွေက အပြင်မှာတွေ့ကြရင် ကျောင်းတုန်းက လူချင်းမသိခဲ့ကြပေမဲ့၊ ခနလေးနဲ့ မောင်နှမတွေလို ချက်ခြင်းစည်းရုံးသွားကြတာကတော့ တမျိုးပဲဗျ၊
မမာလာဖြိုးကတော့ ခပ်မိုက်မိုက်ပဲဗျ၊ ယောက်ျားနဲ့၊ ခလေးတော့မရှိသေးဘူးဆိုပဲ၊ ဒေါ်မျိုးမမကတော့ အပျိုကြီး ဆိုပဲ၊ တောင့်တာကတော့ ဗျာစားမကုန်ကြီးပဲ အဟီး၊ နေ့လည်က ဝင်းဝင်းလေးကို တဝစားလာခဲ့ရလို့ နူံးချိနေတာ တောင်မှစိတ်ကထချင်သေးတယ်။ လူကတော့မနိုင်တော့ပါဘူး၊ အဟီး။ စခန်းကကောင်မလေးတွေကိုပဲ ကြီးကြပ်ပြီး ဧည်သည်ဆောင်မှာ အိပ်ခန်းတွေကို ပြင်ဆင်ခိုင်းလိုက်ရတယ်၊ ညနေစောင်းတော့ အကိုမှာထားလို့ သေခြာသိမ်းထားရတဲ့ ဂျော်နီဝါကားဘလက်လေဘယ်တလုံးထုတ်ပြီး အကို့အခန်းယူသွားပေးရတယ်၊ ဦးကြီးဆောင်ကတော့ အမြီးပုဂံတွေနဲ့ရောက်နေပြီ၊ အကိုနဲ့ ကိုမောင်ဟန်တို့ ပုလင်းစဖွင့်ပြီး စချကြတော့ ကျနော်ဘေးက လိုတာတွေ လိုက်လုပ်ပေးနေတာ အကိုက ဟေ့ကောင်ပေါ်ဦး မင်းလည်းဝင်လုပ်လေကွာ၊ ဆိုလို့ အားနာသလိုပုံပေးရင်း တခွက်ဝင်ဆွဲလိုက်ရတယ်၊ သူတို့လည်းသိပ်မသောက်ပါဘူး၊ မမမျိုးတို့နဲ့ ထမင်းစားရအုန်းမယ် ဆိုပြီး နည်းနည်းပဲ ချပြီး ထမင်းစားဆောင် သွားကြပါတော့တယ်။ အဲဒီညကတော့ ကျနော်တော့ မနေ့ကလည်းမမြတ်မွန်၊ ဒီနေ့နေခင်းကလည်းဝင်းဝင်းဆိုတော့ တကိုယ်လုံးနူံးချိလို့ တုန်းကနဲ အိပ်မောကျသွားရပါတော့တယ်။
နောက်နေ့ မှာအကို ဧည့်သည်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုတ်နေတုန်း ဦးကြီးဆောင်ကို ကျနော် သွားအစ်ရပါတယ်၊ …ဟေ့ ခင်ဗျားကြီး ဦးသာအေးတို့လယ်တဲကို ဘာလာလုပ်တာလဲ…. …ဟား..မောင်ပေါ်ဦးကလည်း ..အဟီးး ဘယ်လိုသိလဲ… …ခင်ဗျားကြီး တာရိုးကိုကျော်ပြီးလစ်သွားတာ တဲထဲကမြင်ရတာပေါ့ဗျ…ဟိုတခါတုန်းကလည်းခင်ဗျားပဲလား.. …အင်းပေါ့ မောင်ပေါ်ဦးရဲ့..ဦးကြီးက လည်းအထာနပ်ပါတယ်ဒီလောက်တော့.. ..ခင်ဗျားကြီးပါးစပ်လုံပေစေနော်.. …လုံပါတယ်ကွာ မောင်ပေါ်ဦးကလည်း.. …ဒီမှာ မောင်ပေါ်ဦး..ဦးကြီးလည်း မမြတ်မွန်ကို စားချင်တယ်ကွာ၊ ကြံဖန်ပေးလို့ရမလား.. ..ဟာဗျာ ခင်ဗျားကလည်း ကိုသန်းတိုးကြီးမကြောက်ဘူးလား… ..ဒီကောင်မလေး ဒီလောက်ထန်တဲ့ဟာကိုကွာ၊ နောက်ပြီး ကိုယ်လုံးကြီးကလည်း တောင့်လိုက်တာ၊ ဝက်သားသုံးထပ်သားကို နူးနေအောင်ချက်စားရသလိုနေမှာပဲ အဟီး.. ..ခင်ဗျားကြီးကလည်းဗျာ၊ ဟင်းနဲ့လူနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ တကထဲမှပဲ အဟီးဟီး ခင်ဗျားပြောမှ ဝက်သားစားချင်လာပြီ၊…. …ငါတို့ကတော့ ဘယ်လိုမှ ဖန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွ…မောင်ပေါ်ဦးက စားပြီးနေတာပဲ မြောင်းလေးသွင်း ပေးလိုက်ရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ဟ.. ကျနော်တချက်စဉ်းစားလိုက်တယ်၊
ဦးကြီးဆောင်ကို နုတ်ပိတ်ဖို့ကတော့ အဲဒီနည်းရှိတယ်၊ မမြတ်မွန်နဲ့ မြောင်းသွင်းပေးဖိုပဲ၊ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ သာ စဉ်းစားမရသေးတာ၊ ဒါပေမဲ့ လွယ်လွယ်နဲ့ တော့လုပ်ပေး လို့မဖြစ်ဘူး၊ သူ့ဆီက ဘာရမလဲ ညှစ်ထုတ်ကြည့်အုန်းမှ၊ မမြတ်မွန်လည်း အဲဒါဆိုရင် ကိုယ်တယောက်ထဲ ရဲ့ ပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူး၊ ဟဲဟဲ တချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်လေ။ ..နေစမ်းပါအုန်းဗျ၊ ကျနော်က ညှပ်ကြောင်းပေးပေးတဲ့အတွက်ဘာရမှာလဲဗျ.. .ငါ နင့်ကိစ္စတွေ ကိုသာအေးတဲကကိစ္စတွေ နုတ်လုံမှာပေါ့ကွ… ခွေးမသားကြီးလူလည်ကြီးလို့ စိတ်ထဲက ကျိမ်ဆဲလိုက်မိတယ်၊ ..အေးပါဗျာ..ဦးကြီးဆောင်ကလည်း၊ ကျနော်ပြောတာက ကျနော်မသိတဲ့ခွင်လေးတွေ စခန်းမှာဘာတွေရှိသေးလဲ လို့မေးတာပါ.. …မောင်ပေါ်ဦးစိတ်ဝင်စားရင်ပြောပြမယ်၊ ဟိုရုံးချူပ်က လာတဲ့ဧည့်သည်တွေသိတယ်မဟုတ်လား. ..အင်း ဘာဖြစ်လဲပြောပါအုန်း.. ..အဲဒီ ကိုမောင်ဟန်က ညက မာလာဖြိုးအခန်းထဲသွားပြီး ဗျင်းနေတယ်ကွ မောင်ပေါ်ဦးရ… …ဗျာ..ဘယ်လိုဘယ်လို….မာလာဖြိုးက အိမ်ထောင်နဲ့ဗျ.. ..အေးလေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညက အဲဒီမောင် သွားဗျင်းတာတော့သေခြာတယ်၊ အဟီး၊ ငါက သူတို့ အခန်းအောက်တည့်တည့်မှာ သွားခြောင်းတာ၊ ခြောင်းတုန်းကတော့ ကောင်မလေးမြင်ရမလားလို့ပါ၊ နောက်တော့ ဟိုမောင်က ဝင်လာပြီး ကြိတ်ဗျုင်းနေတာ အသံတိတ်ပဲ လီးနဲ့စောက်ဖုတ်ဝင်ထွက်ထိတဲ့ အရည်သံပဲ ကြားရတယ်၊
အဟီး.ဒေါ်မျိုးမမ မကြားအောင်ထင်တယ်၊ကွ.. .ငါဒီည ထပ်သွားချောင်းအုန်းမလို့ လိုက်မလား.. ..ဟာဦးကြီးဆောင်တယောက်ထဲလား.. …အေးပေါ့ကွ ဒီကိစ္စက ပါးစပ်ပွလို့ကောင်းတာမှ မဟုတ်တာ မင်း နဲ့ ဝင်းဝင်းလိုပေါ့..အဟီး.. …ဟာဗျာခင်ဗျားကြီး ပါးစပ်က လုံးဝ မထွက်နဲ့နော်ဒါပဲ… …အေးပါကွာနောက်တာပါ… အဲလိုနဲ့ အဲဒီနေ့ညက ကျနော်နဲ့ ဦးကြီးဆောင်တို့ ဧည့်သည်ဆောင်အောက်ထပ်မှာ လေးဘက်ထောက်ရောက်ခဲ့ကြတာပေါ့၊ အိမ်တွေက ဒီရေအတက်အကျရှိတဲ့နေရာမှာ ဆောက်ထားတာမို့ ခြေတန်ရှည်တယ်ဗျ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီရေအတက်ဆုံးအချိန်ကို ရေလွတ်ရုံကြမ်းကို မြှင့်ဆောက်ထားတာမို့ သိပ်အမြင့်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး၊ ကျနော်တို့ခါးလောက်ပဲရှိမယ်၊ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့တော့ အေးဆေးခေါင်းနဲ့ ကြမ်းနဲ့လွတ်တယ်၊ ဒီညတွေက ရေတက်မဲ့ညတွေလည်းမဟုတ်တော့ အသာလေး အိမ်အောက်သွားထိုင်နေလိုက်ရုံပဲ၊ မှောင်လည်းမှောင် ခြုံပုတ်တွေ သစ်ပင်တွေနဲ့ဆိုတော့သတိမထားကြည့်ရင် မမြင်ရပါဘူး၊ ပါးစပ်မှာ ဆေးရွက်ကြီးတွေခဲလို့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ကြတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ မောင်မင်းကြီးသားက ပေါ်မလာဘူးဗျ၊ မမာလာဖြိုးကလည်း ကောင်းကောင်းတောင် အိပ်မောကျနေသံ တရှုးရှုးကြားနေရတော့ ကျနော်လည်း စိတ်ပျက်လာတယ်၊ ဦးကြီးဆောင်ကို လက်တို့ပြီး သွားရအောင်လို့ အချက်ပြလိုက်တယ်၊
ဦးကြီးဆောင်က ခနလောက်စောင့်ပါအုန်းလို့ အချက်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကိုမောင်ဟန့်အခန်းကနေ ကြမ်းပြင်ပေါ်က လမ်းလျှောက်လာသံကြားတယ်၊ ကျနော်တို့ ရယ်ဒီပြင်နေတုန်း ပဲ၊ သူက အခန်းပေါက်ကိုကျော်ပြီး အပြင်ထွက်သွားတယ်၊ နောက် ကပြင်ကနေ အောက်ကို သေးလှမ်းပန်းနေတာကြားရတယ်၊ စောက်ရေးထဲမှာလို့တွေးရင်း စောင့်နေပြန်တယ်။ ပြီးသွားတော့ ပြန်ဝင်လာတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ စောင့်နေတဲ့အခန်းဘက်ကိုမလာဘူး၊ သူ့အခန်းဘက်လည်းမသွားဘူး၊ ခေါင်းရင်းဘက်ကို လျှောက်သွားသံကြားတယ်၊ ခေါင်းရင်းဘက်မှာက အခန်းနှစ်ခန်းရှိတယ် တခန်းက လောလောဆယ် အရေးပေါ်ပစ္စည်းတွေထားပြီး နောက်တခန်းက ဒေါ်မျိုးမမ အိပ်တယ်၊ ဦးကြီးဆောင်နဲ့ ကျနော်တို့ တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီး ဒေါ်မျိုးမမ အခန်းအောက်ကို အသံမထွက်အောင် လေးဘက်ထောက်သွားမိကြတယ်၊ အောက်ရောက်တော့ စကားပြောသံသဲ့သဲ့ကြားရတယ်၊ ကျနော် ကကြမ်းပြင်ကို နားနဲ့ကပ်ပြီး နားထောင်လိုက်တယ်၊ ကြမ်းကြားတွေကလည်း အကြဲကြီးတွေဗျ၊ မီးထွန်းထားလို့ကတော့ ကောင်းကောင်းချောင်းလို့ကောင်းတယ်၊ အခုကတော့ မီးမှောင်ချထားလို့ဘာမှ မမြင်ရဘူး၊ အသံပဲကြားရတယ်။
…မောင်ဟန်လေး ဖြစ်ရဲ့လားကွယ်..မာလာဖြိုးရော… ..မမာလာပင်ပန်းလို့တရှုးရှုးတောင်ဟောက်နေပြီမမမျိုး..စခန်းတခုလုံးလည်း အိပ်ပျော်နေကြပါပြီ… ..အင်း ကွာ ဒါပေမဲ့ အမ ကလန့်တယ်ကွ၊သိတယ်မဟုတ်လား ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာလေ.. ..သိတာပေါ့မမမျိုးရယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်က အခုလို အခွင့်အရေးမျိုးရဖို့မလွယ်ဘူးလေ၊ နောက် မမမျိုးကိုလည်း ညီလေးကလွမ်းနေပြီဗျ.. ..ခစ်ခစ်.သူ့ညီလေးကလည်းလွမ်းလွမ်းနိုင်လွန်းတယ် တခါထဲ နောက်ပြီးသိပ်လည်းအငိုသန်တာပဲ ခစ်ခစ်. .မမမျိုးသာ သူ့ကို ချော့ပေးပါတော့မမမျိုးရယ် နော်.. နောက်တော့ အဝတ်အစားသံငြီးတွားသံ တပြွတ်ပြွတ်အသံတွေနဲ့၊ ဒေါ်မျိုးမမ တယောက် ကိုမောင်ဟန့်ကို ပုလွေပေးနေတာ သိသာလှသည်၊ ကိုမောင်ဟန့်တပြတ်ပြတ်ရက်နေသံလည်းကြားရသည်၊ ဆစ်စတီနိုင်းနေကြတယ်ထင်တယ်၊ အဟီး ကျနော်တို့မှာ မှောင်မှောင်မဲမဲထဲ အသံတွေ နားထောင်ရင်းနဲ့ လီးတောင်နေကြရသည်။ ….ဟန်လေးလာလုပ်တော့ကွာ မမ မနိုင်တော့ဘူး.. ..ဟုတ် မမမျိုး.. နေရာရွှေ့သံ ကြားရသည် ခနနေတော့၊ ဖုတ်ဖုတ်ဖတ်ဖတ်၊ စွိစပ်အသံတွေနဲ့ အိအိ ကျိတ်ငြီးသံတွေ၊ ခွီး ကျနော့်စိတ်ထဲ မနာလိုလိုက်တာ ကိုမောင်ဟန်ကောင်းစားလှချည်လားဗျာလို့ပေါ့။
မနက်ကျတော့ မြို့မှာ ရုံးထိုင်တဲ့ အေစီအီး ဦးဇော်ဦးလည်း ဌာနက မော်တော်ဘုတ်နဲ့ ရောက်လာတယ်၊ ကျနော်တို့ ဧည့်သည်တွေအတွက် စားကောင်းသောက်ကောင်းတွေ ပြင်ဆင်ရတော့တာပေါ့ဗျာ၊ စခန်းမှာရှိတဲ့ကောင်မလေး တွေလည်း တယောက်မှ မနေရ၊ အကုန်မီးဖိုချောင်မှာ ဝိုင်းကူကြရတာပေါ့၊ ထမင်းစားကြတော့ ကျနော် နဲ့ ညီညီက အငယ်ဆုံးတွေ ဆိုတော့ မစားသေးဘူး ဆိုတာ မရဘူး၊ ဒေါ်မျိုးမမ က ဝင်စားခိုင်းတယ်၊ စားပွဲက အရည်ကြီးဆိုတော့ လူကတော့ ဆန့်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ကသာ တောမှာနေတာ ကြာသွားတော့ ဧည့်သည်တွေနဲ့ ဆိုနည်းနည်းရွံ့နေတာ၊ ဒေါ်မျိုးမမ ထက် ဦးဇော်ဦး က နည်းနည်းကြီးမယ် ထင်တာပဲ၊ ဒေါ်မျိုးမမ က အပျိုကြီး၊ ဦးဇော်ဦး သား က အထက်တန်းကျောင်းသား တောင်ဖြစ်နေပြီ၊ ဦးဇော်ဦးက အခုမှ နောက်မိန်းမ ယူထားတာ မကြာသေး၊ သူ့အမျိုးသမီးက မြို့နယ်တရားသူကြီး၊ သူ့ထက်တော့ငယ်မယ် အပျိုကြီးပဲ၊ ကျနော်တော့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတုန်းက တခါပေါင်းမှ စုစုပေါင်း လေးခါလောက်ပဲ တွေ့ဖူးသေးတယ်၊ မင်္ဂလာဆောင်သူတိုးသမီး အချိတ်ထမီနဲ့တောင် ဖင်ကြီးက ရွဲကားနေတာပဲ၊ အဟီး တော်တော်မိုက်တယ်။ ထမင်းဝိုင်းမှာ စားပွဲထိပ်ဆုံးက ဦးဇော်ဦး ကထိုင်လို့ပေါ့ ပြီးမှ ဒေါ်မျိုးမမ၊ မမာလာဖြိုး၊ မမြတ်မွန်၊ ကိုသန်းတိုး ၊ဒီဘက်အခြမ်းမှာတော့ အကိုကိုမိုးအောင်၊ ကိုမောင်ဟန်၊ ကိုချစ်ဆွေ၊ ကျနော်၊ပြီးတော့ညီညီ။ စကားတွေဖောင်လောက်အောင်ပြောနေကြပေမဲ့ ကျနော့်အတွေးထဲမှာတော့ ကိုမောင်ဟန်တယောက် တညတခန်းကူးပြီး ဆော်နေတာ တွေးတွေးပြီး လောင်တီးနေမိတယ်ဗျာ။
မမာလာဖြိုးကြီးကလည်း အမိုက်စားဗျ၊ အင်း ကျနော်က တော့ အခုထိုင်ထမင်းစားနေတဲ့ သုံးယောက်ထဲမှာ မမြတ်မွန် ကိုပဲ ဆော်ဘူးတယ်၊ အဟီး၊ ဘေးနားက လိုက်ပွဲတွေ လိုက်ထည့်ပေးနေတဲ့ ဝင်းဝင်း ပါဆိုရင်တော့ နှစ်ယောက်ပေါ့၊ အဟိ။ ထမင်းပွဲတွေ အတွက်လိုအပ်တာတွေ ဘေးကနေ စီစဉ်ညွှန်ကြားနေတဲ့ ဦးကြီးဆောင်က တော့ ခတ်တည်တည်ပဲ၊ သူဘာမှ မသိသလိုနဲ့၊ အဟီး ဒီလူကြီးအထင်သေးလို့မရဘူး မှင်သေတဲ့နေရာ မှာတော့။ မမြတ်မွန်က လည်း မှင်သေပါ့ဗျား၊ ကျနော်တောင် သင်ခန်းစာ နည်းနည်းရသလိုဖြစ်သွားတယ်၊ လူတွေက အတွေ့အကြုံများ လာလေ ပိုဟန်ဆောင်ကောင်းလာလေပဲ ဆိုတာ၊ ဟဲဟဲ။ ဝင်းဝင်းလေးက ဖင်လေး တတုန်တုန် နဲ့ ဘေးနားက ကူပေးနေရှာတာကြည့်ပြီး စိတ်က ထလာပြန်တယ်၊ ငါတော့ သတိထားနေမှ ရတော့မယ်၊ သာဓုနဲ့ကတော့ ညိလို့မဖြစ်ဘူးလို့တွေးနေမိပါတော့တယ်။ အဲဒီဧည့်သည်တွေ ရောက်နေတဲ့ ရက်ပိုင်း ကျနော်လည်း ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဗျာ၊ ဟိုလိုက်ပို့ ၊ဒီလိုက်ပို့၊ ဟိုဟာရှင်းပြရ ဒီဟာရှင်းပြရနဲ့ ပါ။ ဧည့်သည်တွေ ပြန်သွားကြပြီးမှ စခန်းလည်း ပြန်တိတ်ဆိတ်သွားတော့တယ်၊ ပုံမှန်အလုပ်တွေပြန်လုပ်ကြရတာပေါ့ဗျာ။ တနေ့ မှာ အကိုနဲ့ ကျနော်တို့ မြို့ကို ကိစ္စတခုနဲ့သွားကြတော့ ဒေါ်ကြီးမထားနဲ့ ဝင်းဝင်းလေး တို့လည်းပါလာတယ်ဗျ၊ ကျနော်ကတော့ အပီပဲပေါ့ စခန်း မြို့ပေါ်ကျရင် ဝင်းဝင်းလေး ကို တနေရာပထုတ်သွားပြီး စိတ်ကြိုက်ဝုန်းမယ်ပေါ့၊ စိတ်ကူးနဲ့ ရူးလို့ ဟစ်ဟစ်။
ကံဆိုးချင်တော့ စခန်းက သတင်းရောက်လာတာ ဟိုနေ့ က ဒီရေအတက်မှာ ကျနော်တို့လုပ်ထားတာတွေ ရေကတွန်းချလိုက်လို့ တဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုလား၊ ထားပါတော့ အဲဒါတွေက အရေးမကြီးပါဘူး အရေးကြီးတာက ကျနော်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဟာမို့ ကိုယ်တိုင်သွားရှင်းရအုန်းမယ် ကိုချစ်ဆွေက လည်း မကိုင်ချင်ဘူး၊ ကျနော်အမြန်စခန်းကို ပြန်လစ်ရတယ်။ ဟိုရောက်တော့ အကို့ကိုယ်စား ကိုသန်းတိုး ရဲ့ စီစဉ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့ လိုက်လုပ်ရတယ်၊ ကိုသန်းတိုးကလည်း တကယ်တော့ အဲဒီကန်ထရိုက် အလုပ်သမားတွေထဲက မိမိုးဆိုတဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ ဘာလိုလို၊ အဲတော့သူကပဲ ပလန်လုပ်တယ် ညဘက် အလှည့်နဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့၊ သူနဲ့ ကျနော် တယောက်တလှည့်စီပေါ့၊ သူက အဲဒီမှာ ညဘက်နေချင်လို့လေ၊ ဟီး၊ အကိုရှိရင် အကိုက ဘာကြောင်တာလဲ လို့မေးလိမ့်မယ်လေ၊ အဲတော့ အကိုမရှိတုန်းသူက အကွက်ထွင်တာ၊ သူမသိတာက မမြတ်မွန်ကြီး က အဗေလပယ်ဖြစ်နေတာပဲ၊ ခွိခွိ၊ သူက မိမိုးကို ကစ်နေတုန်း ကျနော်က မမြတ်မွန်ကြီးဆွဲ၊ အဆင်ကို ပြေနေလို့၊ ဒီတခါတော့ဦးကြီးဆောင်က အကိုမရှိတုန်း အကို့အခန်းကနေခြောင်းချင်တယ်၊ မောင်ပေါ်ဦး မီးဖွင့်လုပ်ကွာ ဆိုတော့ ကျနော်လည်း အာဝါရားနဲ့ မမြတ်မွန်ကြီး ကို စည်းရုံးရတာပေါ့၊ ဟဲဟဲ၊ စော်ကြီးက လည်း အထန်ကြီးဆိုတော့ သိပ်မခက်ပါဘူးဗျာ၊ ဟဲဟဲ၊ အကိုမရှိဘူး ဘယ်သူမှ လည်းမကြားပါဘူး မီးဖွင့်လုပ်ရအောင်ဆိုပြီး စည်းရုံးတာပေါ့၊ သိပ်တောင်မပြောရပါဘူးဗျာ၊ ကျနော်ကလည်း ကြည့်ပြီး လုပ်ချင်နေတာဗျ၊ မမြတ်မွန်လို ဖွေးဖွေးကြီးကို၊ ဦးသာအေး လယ်တဲ မှာ တခါပဲ မြင်မြင်ထင်ထင် လုပ်လိုက်ရတာ၊ နောက်ပိုင်းတွေက မှောင်ထဲမှာပဲဆွဲရတာလေ။
ကျနော်အဲဒီညနေရေချိုးတော့ ညီတော်မောင်ကို သေသေခြာခြာဆပ်ပြာမွှေးတွေဘာတွေ တိုက်သွားလိုက်တယ်၊ ဟဲဟဲ၊ မမြတ်မွန် ကောင်းကောင်းလေး မှုတ်ပေးတာခံချင်လို့လေ၊ မမြတ်မွန်ကလည်း လုပ်ပေးရှာပါတယ်ဗျာ၊ တော်တော်တော့ခံလို့ကောင်းတာဗျ၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်ညီတော်မောင် အရမ်းဖောင်းတင်းလာတော့ သူက သူ့ပါးစပ်ထဲက ထုတ်လိုက်ပြီး ကျနော့်အပေါ်က တက်ခွတော့တာပဲဗျ၊ သူက နိကပ်လည်း ချွတ်ထားတာဆိုတော့ ချောင်းကြည့်နေတဲ့ ဦးကြီးဆောင်အကြိုက်ပေါ့ဗျာ၊ သူ့နိူ့တွေက မီးရောင်အောက်မှာ ဝင်းလို့၊ တုန်တုန် တုန်တုန်နဲ့၊ ကျနော့်အပေါ်တက်ဆောင့်နေတာ၊ ကျနော့်မှာ ချက်ချင်းကို ပြီးချင်နေတာ၊ အတင်း စိတ်ကို ရှောက်ပြောင်းနေရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အောက်ကလူမဟုတ်လား၊ သူက အရှိန်မြန်လာတော့ ကိုယ်ဘယ်ထိန်းနိုင်တော့မှာလည်း၊ မတတ်နိူင်တော့ဘူး မမြမွန်လည်း ကျနော့်ကိုယ်ပေါ်မှောက်ကျ ကျနော်လည်း ပူကနဲပူကနဲ ညီတော်မောင်ခေါင်းက မီးတောင်ပေါက်သလို ချော်ရည်တွေ ပန်းထွက်ကုန်တော့တာပဲ၊ သူကလည်း မောကျနော်လည်းမောဆိုတော့ နှစ်ယောက်ဖက်ရင်း နားနေကြရတယ်၊
ကျနော်ကတော့ သူ့ချိုချိုတွေကို နို့မထွက်ပေမဲ့ အမောပြေ စို့ရင်း ဝက်မှိန်းမှိန်းနေလိုက်တာပေါ့ဗျာ၊ မမြတ်မွန်ကလည်း သူ့လက်သည်းကလေးနဲ့ ကျနော့်ခေါင်းတို့ ကျောတို့ ကို ဖွဖွလေး လျှောက်ဆွဲကုတ်ခြစ်ပေးနေတယ်။ မမြတ်မွန်နဲ့ ကျနော်နဲ့က အဲဒီကိစ္စတွေသာ လုပ်တာ တယောက်နဲ့ တယောက်က အပိုစကား ဘာမှ မပြောဖြစ်ဘူး၊ သူကလည်း ကျနော့်ကို ဒီကိစ္စလုပ်ဖို့ပဲ သဘောထားပုံရတယ်၊ ကျနော်ကလည်း လုပ်ရရင်ပြီးရောလေ၊ ခွိ၊ ကျနော်နဲ့ ဝင်းဝင်းလေးလို၊ စကားမပြောဖြစ်ကြဖူး များသောအားဖြင့်ကတော့ အသံတိတ်ပဲ၊ တခါတလေ လိုအပ်သလောက်ပဲ၊ ဟိုဘက်ရွေ့၊ ဟိုဟာလုပ်ပေး၊ အဲလောက်ပဲ ပြောဖြစ်ကြတာ။ နောက်ဆုံးဘိတ်အချီကတော့ ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်ခိုင်းပြီး အနောက်က ကျုံး လိုက်တာပါပဲ၊ မမြတ်မွန်လည်းကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့၊ မမြတ်မွန်က ခေါင်းအုန်းပေါ်မျက်နှာအပ် ထားလို့ မမြင်ရမှန်းသိလို့ ကျနော်က ဦးကြီးဆောင် ချောင်းနေတဲ့ဘက်ကို လက်မထောင်ပြလိုက်သေးတယ်၊ ခွိခွိ။ အဲဒီရှိုးပြီးသွားတာနဲ့ နောက်နေ့ကစပြီး ဦးကြီးဆောင်က ပိုပြီးအပူကပ်တော့တာပါပဲ၊ ခွိခွိ။ သိပ်မကြာပါဘူး အခွင့်အရေးပေါ်လာတာပါပဲ၊ ကိုသန်းတိုး ခရီးထွက်မယ်ပေါ့ ထုံးစံအတိုင်း အဲဒီည ကျနော် မမြတ်မွန်ကြီးကို ညဘက် နိုးရင်လာခဲ့မယ်ဘာညာပေါ့ရွီးထားတယ်လေ၊ မမြတ်မွန်က ကျနော်လာမဲ့ညဆိုရင် နောက်ဘက်က တံခါးကို စေ့ရုံပဲ စေ့ထားတာဗျ၊
ကျနော်က ဦးကြီးဆောင်ကို သွားခိုင်းလိုက်တယ်၊ တကယ်လို့ မမြတ်မွန်ထအော်ရင်လည်း တံခါးကြီးပွင့်နေလို့ ဝင်ကြည့်တာလို့ ပြောဗျာလို့၊ ရင်တော့ထိတ်မိသား၊ ဦးကြီးဆောင်ကို ရေတွေ ဘာတွေ အသေအခြာချိုးခိုင်းလိုက်ပြီး ကျနော်သုံးတဲ့ ရေမွှေးတွေဘာတွေ ပေးသုံးလိုက်သေးတယ်၊ အဟီး၊ ကျနော့်ကိုယ်စား မမြတ်မွန်အခန်းထဲ ဝင်သွားဖို့၊ ဟဲဟဲ ဘာဖြစ်မယ်ထင်သလဲ။ ဦးကြီးဆောင်တယောက် နောက်နေ့ တနေ့လုံးအိပ်နေတော့တာပဲဗျာ၊ ခွိခွိ၊ ကျနော့်မှာ အတင်းနိုးပြီးမေးရတယ်၊ အဆင်ပြေသလားလို့၊ အဟီး၊ ပြေတာကမှ တော့ မပြောနဲ့တော့ မောင်ပေါ်ဦးရေတဲ့။ မမြတ်မွန်က ပထမ မသိဘူးတဲ့၊ နောက်တော့ မသိဟန်ဆောင်နေတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဦးကြီးဆောင် မမြတ်မွန်ကြီးကို ဆာနေတာကြာပြီမို့ မနားတန်းဆွဲလိုက်တာ မနက်လင်းခါနီးမှ၊ ဦးကြီးဆောင်ကို ဦးကြီး တော်ပြီနော်တဲ့ ကျမဟာလေး တောင်ပူနေပြီလို့ ပြောရှာတယ်တဲ့။ ခွိခွိ။ ကျနော်ကတော့ နောက်ဦးကြီးဆောင် သူမမြတ်မွန်ကို ဘယ်လိုတွယ်တယ် ဆိုတာအသေးစိတ်ပြောတော့ နားထောင်ရင်းနဲ့တောင် စိတ်တွေကြွလာရပြန်တယ်၊ ဟီးဟီး။ မမြတ်မွန်နဲ့တွေ့တော့ တိုးတိုးလေး၊ အမရေ ကျနော်ညက ပင်ပန်းပြီး အိပ်ပျော်သွားတယ်၊ ဆောရီးပဲနော်လို့ပြောလိုက်တော့၊ အင်းပါရပါတယ်၊ ငါလည်း ညက အိပ်ပျော်သွားတာ မနက်နေမြင့်မှပဲ နိုးတော့တယ်၊
တရေးပဲ ဆိုပဲ။ မိန်းမတွေများ၊ ခွိခွိ။ ကျနော်နဲ့ ဦးကြီးဆောင်တို့ တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြောကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်သလား၊ မိန်းမတွေရဲ့ ထုံးစံ ဘူးခံတာက အကောင်းဆုံးလက်နက်လို့ပဲယူဆထားသလားမသိပါဘူး၊ အဟီး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်ကို အံသြထူးဆန်းစေတဲ့ သတင်းကတော့ ဝင်းဝင်းလေး ဆီကကြားလိုက်ရတာပါပဲ၊ ကျနော်မြို့ကနေ စခန်းကို ပြန်ဆင်းလာတဲ့နေ့က သူတို့ ကုတင်တလုံးထဲမှာ ၃ယောက်အိပ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်တဲ့၊ သူတို့ ဆိုတာက အကိုရယ်၊ ဝင်းဝင်းရယ် ဒေါ်ကြီးမထားရယ်ပေါ့။ ဝင်းဝင်း နဲ့ ဒေါ်ကြီးမထားတို့က မိန်းမသားချင်း သူတို့နှစ်ယောက်က ကျနော်နဲ့ ဦးကြီးဆောင်လိုပဲ၊ အတွင်းကျကျ ရင်းနှီးတယ်ခေါ်မလား၊ သူနဲ့အကိုနဲ့ အကြောင်းကို ဒေါ်ကြီး ကိုပြောထားတာမို့ ဒေါ်ကြီးက သူ့ကို အလည်ကထားအိပ်တယ်တဲ့၊ ကျနော်အံအားသင့်တာက ပုံမှန်ဆို အကိုက အိပ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သူ့ မိတ်ဆွေတွေအိမ်တလုံးလုံးမှာသွားအိပ်မှာပဲ၊ ကြည့်ရတာ အကိုလည်းဝင်းဝင်းလေး အပေါ်စိတ်နည်းနည်း လာနေလို့ထင်တယ်။
ညကတော့ အကိုက ထုံးစံအတိုင်းပဲ ဝင်းဝင်းလေး ကို အနောက်ကပဲ ထောက်ပြီးပွတ်နေတယ်တဲ့ ဝင်းဝင်းလေးက သူ့ဖင်လုံးလေးကို ကော့ကော့ပေးတော့ အကို့ ဟာကြီးက အရမ်းတောင်လာတယ်တဲ့၊ ဝင်းဝင်းက ဒီတခါတော့ အကို့ ကို သူကိုယ်တိုင်ကလည်း လိုချင်တာပါလို့ ပြရအောင်အကို့ ဘက်လှည့်ပြီး ဖက်လိုက်တယ်တဲ့၊ အဲဒီတော့မှ အကိုက ဝင်းဝင်းကို နူတ်ခမ်းတွေစုပ်၊ နို့တွေနှယ်၊ နို့တွေစုပ်လုပ်လာတယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးကျတော့ ဝင်းဝင်း ရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာပဲ သူ့ကောင်ကြီး ကို ပွတ်ပြီး လရည်တွေပန်းထုတ်လိုက်တယ်တဲ့၊ အဲဒါနဲ့ ဝင်းဝင်းလည်း သူ့ ပေါင်တွေမှာ ပေသွားတာကို ရေချိုးခန်းသွားဆေး ပြီး ပြန်လာတော့ အကို့ကို ကျော်ပြီး အလယ်သွားမအိပ်ချင်တာနဲ့ အကို့ဘေးမှာပဲ ဝင်အိပ်လိုက်တော့တယ်တဲ့၊ ဒါပေမဲ့၊ နောက် ကုတင်က တကျီကျီ အသံမြည်ပြီး လှုပ်နေလို့ နိုးလာပြီး ကြည့်လိုက်တော့၊ အကိုက ဒေါ်ကြီးမထားကို ဒေါ့ကီဆွဲနေတာတဲ့၊ ကြမ်းချက်ကတော့ ဒေါ်ကြီးမထား ဖင်နဲ့အကို့ပေါင်ခြံ ရိုက်သံကို တဖန်းဖန်းတောင်မြည်တယ် ဆိုပဲ၊ နောက်တော့ ဒေါ်ကြီးမထားတောင်မှ ပျော့ပြီး လက်မထောက်နိုင်တော့ဘဲ ခေါင်းအုန်းပေါ်မျက်နှာအပ်ကျသွားပြီး ဖင်ဘူးတောင်းထောင် ဖြစ်သွားတယ်တဲ့၊ ကြည့်ရတာ ဒေါ်ကြီးမထား ပြီးသွားတယ်ထင်တယ်တဲ့ အဲတော့မှ အကိုက ဝင်းဝင်းကို လှမ်းကြည့်တော့ သူတို့ မျက်လုံးချင်းဆုံမိကြတယ်တဲ့၊ အကိုက ဝင်းဝင်းကို ပြုံးပြလိုက်ပြီး ဒေါ်ကြီးမထားအဖုတ်ထဲက သူ့လီးကြီးကို ထုတ်ပြီး ဝင်းဝင်း ပေါင်နှစ်လုံးကြားကို ဝင်လာတယ်တဲ့၊ ဝင်းဝင်းက အလိုက်သင့်လေး ထမိန်လှန်ပေးလိုက်တော့ ဝင်းဝင်း ပေါင်နှစ်လုံးကို ပုခုံးပေါ်ထမ်းပြီး အသေဆော်တော့တာပဲတဲ့၊
နောက်ဝင်းဝင်း အထဲမှာပဲ ပြီးသွားတယ်တဲ့၊ နောက်တော့ သူတို့တွေ သုံးယောက်စလုံးထပြီး တယောက်တလှည့်စီရေချိုးခန်းသွားဆေးကြောကြတယ်တဲ့၊ မျက်စေ့တွေ လည်းကျယ်ပြီး ဗိုက်ဆာလာကြတာနဲ့ ရှိတဲ့မုန့်တွေ အချိုရည်တွေနဲ့ စားသောက်ကြတယ်တဲ့၊ အကိုကတော့ အရက်နည်းနည်းထပ်ချတယ်ပြောတယ်၊ နောက်တော့ အိပ်မရကြမဲ့ အတူတူ ဆိုပြီး ဒေါ်ကြီးမထားကို တလှည့်၊ ဝင်းဝင်းကို တလှည့် မိုးလင်းပေါက် ဆွဲတော့တာပဲတဲ့၊ ခွိး။ ကျနော်တောင် တော်တော်ဖြုံသွားတယ်၊ အဟီး တခါမှ တောင် စိတ်ထဲ မတွေးမိဘူး၊ အဲလိုမျိုး နှစ်ယောက်တယောက် ဆော်ရမယ်ဆိုတာ၊ နောက်ပြီးတော့ နောက်တယောက်ကလည်း ဒေါ်ကြီးမထားတဲ့ခွိ။ စခန်းမှာ မိန်းခလေး တွေ အနေအထိုင်မတတ်တတွေ့ရင်တောင် ဆူတတ်လို့ ကောင်မလေးတွေ ကြောက်ရတဲ့၊ ဒေါ်ကြီးမထား၊ အခုမှ ကျနော်လည်း ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ သူက ကောင်မလေးတွေလိုမဝတ်စားလို့သာ၊ သူ့ဘော်ဒီက ကျစ်ကျစ်ကလေး၊ ဖင်ကြီးက ကောင်းလိုက်တာ လုံးပြီးတစ်နေတာပဲ၊
အင်္ကျီကလည်း များသောအားဖြင့် ရင်ဖုံးလိုမျိုးကို ပွပွပဲ ဝတ်တတ်တော့ ဘော်ဒီကို မမြင်ရတာ၊ ဒါပေမဲ့ အကိုတောင် ကောင်းကောင်းပေးသွားတယ်၊ ဆိုတော့ ကျနော်လည်း စမ်းချင်လာတယ်၊ ခွိ၊ ဦးကြီးဆောင်ကိုတော့ အားနာသား၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကလည်းသူ့ကို မမြတ်မွန်နဲ့ ချိတ်ထားပေးပြီးပြီလေ၊ အဟီးဟီး။ နောက်တခုက ဒေါ်ကြီးမထားက ကျနော့်ကိုကျတော့ သူ့တူလေးလို ချစ်တာ ကျနော်က ဘယ်လိုကြံရမလဲ၊ အဟီး စဉ်းစားလိုက်အုန်းမယ်။လောလောဆယ်တော့ ဝင်းဝင်းလေးကို တနေရာချိန်းလိုက်အုန်းမှ၊ အရမ်းကို ဆာနေပြီ။
ကျနော်တို့ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆိုတာက မိုးတွင်းဆိုရင် အလုပ်က မရှိသလောက်ပဲဗျ၊ အထူးသဖြင့် အခု ကျနော်တို့ စီမံကိန်းရှိတဲ့ဒေသလို မိုးအရမ်းကောင်းတဲ့နေရာတွေ ဆိုရင် လုံးဝကို အလုပ်လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလိုပဲ၊ အကိုကလည်း ရုံးချူပ်သွားတော့ ကိုသန်းတိုးက အကြီးဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့၊ သူကလည်း လစ်ချင်ရင် ကိုချစ်ဆွေကို စခန်းတာဝန်အပ်ပြီးလစ်တာပဲ၊ ကိုချစ်ဆွေက ကျနော့်လို အငယ်တန်း အင်ယာ ပဲဒါပေမဲ့ သူက လုပ်သက်ရင့်တယ်၊ အိမ်ထောင်နဲ့၊ အဲလိုမျိုးတနေ့ မှာ ကျနော်နဲ့ ဦးကြီးဆောင်တို့ အရက်ချနေကြတာပေါ့၊ မိုးကလည်းကောင်းသလားမမေးနဲ့ ဗျင်းတာ၊ ဝုန်းဒိုင်းကျဲပဲ၊ ကျနော်တို့လည်း ဦးကြီးဆောင်အခန်းထဲမှာ ဒေါ်ကြီးမထား လုပ်ထားပေးတဲ့ ငရံခြောက်ဖုတ်ဆီဆမ်းလေးနဲ့ လဘက်သုတ်နဲ့ မြည်းရင်း တောအရက်ကို ဗျင်းနေကြတာပေါ့။ ဒီနေ့ မမြတ်မွန် ဆီကို ဦးကြီးဆောင် ဆောင်တော်ကူးမယ် ဆိုတာလည်း ကျနော်က သိနေပြီလေ၊ ဦးကြီးဆောင်ကိုယ်တိုင်က အပူကပ်ထားလို့၊ ကျနော်က ဦးကြီးဆောင်ကို ညဘက် ရေတက်ရင် တာတွေ ဘက်ကို စောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီး တာဝန် အလှည့်ချထားပေးရတယ်၊ အဟီး ၊ ဒါမှ သူလည်း ဒေါ်ကြီးမထားကို ညဘက်တညလုံးပျောက်ထွက်နေတာ အကြောင်းပြချက်ရမှာ၊ အဲလိုသောက်ရင်း အရှိန်ရလာတော့ ဦးကြီးဆောင်က။
..ကဲ မောင်ပေါ်ဦးရေ ငါတော့လစ်ရတော့မယ် အချိန်ကျလာပြီ၊ ဟိုကောင်ကလေးတွေနဲ့ချည်းပဲက စိတ်မချရဘူး.. ..ဟုတ် ဦးကြီးဆောင်၊ သတိနဲ့လည်းသွားအုန်းနော်… ..အေးပါဟ၊ မောင်ပေါ်ဦး အေးဆေးသာ သောက်နေခဲ့ပါ၊ မနက်ဖြန်လည်း ဘာမှ လုပ်စရာမှ မရှိပဲဟာ.. ..ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးဆောင်… ဦးကြီးဆောင်ထွက်သွားတော့ ကျနော် လည်း ဆက်သောက်နေမိတော့တယ်၊ မိုးသာ ရွာနေတယ် သိပ်တော့မအေးလှဘူးဗျ၊ ဒေါ်ကြီးမထားကလည်း တလှုပ်လှုပ်နဲ့ သူ့ အိမ်အလုပ်ကလေးတွေလုပ်နေရာက ကျနော်တယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့တော့မှ အနားလာထိုင် အမြီးနိူက်စားရင်း စကားလာပြောလာတယ်။ …မောင်ပေါ်ဦး ဝင်းဝင်း ဘာပြောသေးလည်း.. ကျနော်နှာစေးချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်၊ ..ဘာအကြောင်းလည်း ဒေါ်ကြီး၊ သာဓုနဲ့ ဖြစ်ပြန်ပလား.. …မဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ အလကားပါ…. ..အင်း ကျနော့်ကိုတော့ ဘာမှ မပြောဘူးဒေါ်ကြီး….. အဲလိုနဲ့ ဟိုလူ့အတင်းပြောဒီလူ့အတင်းပြောနဲ့ နည်းနည်းမိုးချူပ်လာတော့ကျနော်လည်း တကယ်ထွေလာတယ်၊ မိုးလည်းတဖျောက်ဖျောက်ပဲရှိတော့တယ်၊ ကျနော်ပြန်တော့မယ် လုပ်မှ မိုးက ပြန်ချလာပြန်တယ်။
..မောင်ပေါ်ဦး ဒီညတော့ ဒီမှာအိပ်လိုက်ပါတော့ကွယ်၊ ဒေါ်ကြီးခြင်ထောင်တလုံးအပိုရှိပါတယ်၊ အဲဒါထောင်ပေးလိုက်မယ်.. ကျနော်လည်း နဂိုထဲက အကွက်ချောင်းနေတာဆိုတော့၊ မူးချင်ယောင်ဆက်ဆောင်လိုက်တယ်၊ အဲဒါနဲ့ ဒေါ်ကြီးထောင်ပေးတဲ့ခြင်ထောင်အောက်မှာပဲ ဝင်လှဲလိုက်တာ တကယ်ကို အိပ်ပျော်သွားတယ်၊ တနာရီလောက်တုန်းကနဲ အိပ်ပျော်သွားပြီးမှ ဆီးအရမ်းသွားချင်တာနဲ့ နိုးလာတယ်၊ မိုးကတော်တော်ကောင်း တာမှ လျှပ်စီးတွေလက်၊ မိုးတွေခြိမ်းနဲ့ပေါ့၊ တံခါးအသာဖွင့်အပြင်ထွက်ပြီးကပြင် ကနေပဲ မိုးထဲကို သေးလှမ်းပန်းလိုက်တယ်၊ ပြီးသွားပေမဲ့ ကျနော့်ကောင်ကြီးက အတောင်မကျသေးဘူး၊ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာပြီးတံခါးကို ဂျက်ချလိုက်တယ်၊ ဒေါ်ကြီးမထားတို့ အခန်းက ကျဉ်းကျဉ်းလေး ဆိုတော့ ခြင်ထောင်နှစ်လုံးက လည်း သိပ်မကွာလှဘူး၊ အပြင်က လျှပ်စီးလက်တာနဲ့ တချက်တချက်အခန်းထဲကို လင်းကနဲ မြင်ရတယ်၊ ပြီးရင် ပြန်မှောင်သွားပြန်ရော၊ မိုးသံနဲ့ အမှောင်နဲ့က မဟုတ်တာလုပ်ဖို့ကို အားပေးနေ သလိုပဲ၊ အဆင်မပြေတော့လည်း မူးနေလို့ ခြင်ထောင်မှားဝင်မိတယ်လို့ ဆင်ခြေပေးရမှာပဲ လို့တွေးရင်း ဒေါ်ကြီးမထားအိပ်နေတဲ့ခြင်ထောင်ဆီလျှောက်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။
ခြင်ထောင်ထဲ အသာလေးဝင်ပြီး ဒေါ်ကြီးမထားနားကပ်အိပ်လိုက်တယ်၊ ဒေါ်ကြီးရဲ့ အသားလေးတွေက နွေးနေတယ်၊ ကျနော်က သူ့နောက်ကျောကနေ ကပ်ဝင်အိပ်လိုက်တာ၊ ဘာများပြောမလဲ၊ ရင်ထဲမှာတော့ တဒုန်းဒုန်းပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်ကြီးက သူ့ကိုယ်တပိုင်းမှာခြုံထားတဲ့ အညာစောင်ပါးလေးကို ခါလိုက်ပြီး ကျနော့်ကိုယ်ဘက်ကိုပါလှမ်း ခြုံပေးလိုက်တော့ ကျနော်သူ့ခြင်ထောင်ထဲ ဝင်လာတာအပြင်သူ့ဘေးမှာ ကပ်အိပ်တာတောင်၊ သိရက်နဲ့ ဘာမှ မပြောဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ကျနော့်အဖို့ကတော့ ဒီလောက်စိမ်း တဲ့အချက်ပြမီး ဘယ်မှာသွားရှာအုန်းမှာပဲ၊ ဒေါ်ကြီးကို အနောက်ကနေတိုးကပ်ပြီး ခါးလေးကနေသိုင်းဖက်ထားလိုက်တယ်၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး စောင်တခုထဲအောက်မှာပေါ့။ ကျနော့်လက်ဖဝါးတွေက ဒေါ်ကြီးရဲ့ ဗိုက်သားလေးကနေ အောက်ကိုလျှောဆင်းသွားပြီး ဆီးခုံလောက်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်ကြီးက ကျနော့်လက်ကို ဖမ်းကိုင်လိုက်တယ်၊ နောက်သူ့ ရင်ဘတ်ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တယ်၊
သူ့ ရင်စိအင်္ကျီက ကြယ်သီးနှစ်လုံးလောက်က ပြုတ်နေတာတွေ့ရတယ်၊ ကျနော် လက်တဖက်ထဲနဲ့ နောက်တလုံးကို ရအောင် ဖြုတ်ကြည့်နေတယ် မရနိုင်ဘူး၊ ဒေါ်ကြီးက သူ့ဘာသာ ကြယ်သီးနောက် နှစ်လုံးလောက်ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော့်လက်တွေက သူ့အင်္ကျီအောက်ကို လျှိုဝင်သွားတော့ ဘရာဇီယာဝတ်မထား ပဲ အိနေတဲ့နို့တွေကို ကိုင်စမ်းမိတယ်၊ ကျနော့်လက်ဖဝါးလေးနဲ့ အပေါ်ကနေ အသာအယာပွတ်ပေးတော့ သူ့နို့သီးခေါင်းတွေမာပြီးထောင်နေတာ ကျနော့်လက်ဖဝါးမှာ လာထောက်နေတယ်၊ ကျနော်ဖွဖွလေး ညှစ်လိုက်တော့ ငြီးသံတိုးတိုးလေး ထွက်လာတယ်။ဒေါ်ကြီးရဲ့ လုံးဝန်းကားစွင့်တဲ့ဖင်ကြီးကလည်း နောက်ကို ကော့လာတော့ ကျနော်ရဲ့ မာန်ထနေတဲ့ ကောင်ကြီးနဲ့ ပွတ်မိနေတယ်။ ကျနော်လည်းကောင်ကြီးကို ပြေလျှော့နေတဲ့ ထမိန်ပေါ်က ပဲ ကျနော့်ကောင်ကြီးကို သူ့ဖင်နှစ်လုံးကြားရောက်အောင် ထိုးသွင်းပြီး ထောက်လိုက်တယ်။ ကျနော့်လက်တွေက ဒေါ်ကြီးရဲ့ နို့တွေကို အားရအောင်နှယ်ပြီးတော့ နောက် ပေါင်ခွဆုံဆီကို သွားပြန်တော့ ဒေါ်ကြီးက အခုနကလိုပဲ ပြန်ဖမ်းဆုပ်ထားပြန်တယ်၊ သူ့စောက်ဖုတ်ကို အကိုင်မခံချင်တဲ့သဘောလား၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်က မွန်နေပြီလေ၊
ဒီလောက်အခြေအနေလည်းရောက်နေမှတော့ ၊ အရှေ့က တိုက်စစ်ဆင် လို့မရတော့ အနောက်ကနေပေါ့၊ အဟီး၊ ဒေါ်ကြီးရဲ့ ထမိန်ကို စုကိုင်ပြီး ဖင်ပေါ်သွားတဲ့အထိလှန်တင်လိုက်တယ်၊ ကျနော့်ပုဆိုးကတော့ ကန်ချွတ်လိုက်ပြီးပြီ၊ အခုတော့ ကျနော့်ကောင်ကြီးက ဒေါ်ကြီးပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲကို အသားချင်းထိ တိုးဝင်နေပြီ၊ ဒေါ်ကြီးရဲ့ ပေါင်ခွစုံနေရာက နွေးနေတယ်၊ ကျနော် ဒူးတဘက်နဲ့ ဒေါ်ကြီးရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ထိုးသွင်းပြီး ထောင်လိုက်တယ်၊ ဒေါ်ကြီးရဲ့ ဒူးတဘက်က ထောင်ရက် ဖြစ်သွားတယ်၊ အဲဒီတော့ ကျနော်က ကိုယ်ကို အောက်ဘက်အသာလေးလျှောဆင်းပြီး ကျနာ့်ကောင်ကြီးကို အသာလေးအပေါ်ကိုကော့ထိုးလိုက်တော့ ကျနော့်ဒစ်ဖူးက စိုစိုစွတ်စွတ် နူတ်ခမ်းအကွဲကြောင်းကို သွားထိုးမိတယ်၊ ဒေါ်ကြီးက ဖင်ကိုကော့ဝိုက် ပြီး နေရာကျအောင်လုပ်ပေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်ကောင်ကြီးက သူ့စောက်မွှေးတွေပေါ်ရှောက်ထိုးမိနေတယ်၊
အဲတော့မှ ဒေါ်ကြီးက သူ့လက်ကလေးနဲ့ ကျနော့်ကောင်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အပေါက်ဝတည့်တည့်လေး ချိန်ပေးလိုက်တယ်၊ ကျနော်ဖင်ကိုကော့ပြီး အသာလေးထိုးသွင်းလိုက်တော့ နွေးထွေးနူးညံ့တဲ့ စောက်ခေါင်းထဲ ကျနော့်ကောင်ကြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးဝင်သွားခဲ့တယ်၊ အဲဒီနောက်တော့ ဒေါ်ကြီးရဲ့ ပေါင်တဘက်ကို လက်နဲ့ဆွဲပြီး စလိုးဖြစ်ပါတော့တယ်၊ ကျနော့်ဆောင့်ချက်နဲ့ အညီဖြစ်အောင် ဒေါ်ကြီးကလည်း ဖင်ကို ကော့ကော့ပေးလာပါတယ်၊ နောက်ပိုင်းတော့ အရှိန်တက်လာပါတယ် နှစ်ယောက်စလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ ဖွတ်ဖက်ဖွတ်ဖတ် ဆောင့်လိုးကြရင်း မကြာခင်ပဲ ကာမအရသာ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်သွားကြရပါတယ်၊ ပြီးတော့ ကျနော့်ကောင်ကြီးကို ဒေါ်ကြီး အဖုတ်ထဲ စိမ်ရင်း နှပ်နေလိုက်ပါတော့တယ်၊ မိုးကလည်း ကောင်းသလားမမေးနဲ့ တဗျုံးဗျုံး တဗြင်းဗြင်း နဲ့ဗျာ၊ တချီသာ ပြီးသွားတယ်၊
ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် တယောက်နဲ့တယောက် စကားတလုံးမှ မပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။ အဲတရေးတောင် မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်၊ အဲနောက်တရေးဖတ်ကနဲပြန်နိုးတော့၊ မိုးလေးက ခေါင်းမိုးပေါ်မှာ ပျင်းယိပျင်းတွဲ့ကျနေတုန်း၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်ကောင်ကြီးက ဒေါ်ကြီးမထားရဲ့ အဖုတ်ထဲ မှာစိမ်လျှက်က မာကြောနေတယ်၊ တခါတလေကျတော့ လည်း ဘာကြောင့်ရယ်မဟုတ်ဘူးဗျ၊ အကြောတင်းတယ် ဆိုတာ၊ သေးပေါက်ချင်လည်းမာတာပဲ၊ တခါတလေ ဥက နည်းနည်းယားလို့လည်း မာတတ်တာပဲ၊ လိင်ကိစ္စကို မတွေးမိပဲနဲ့ မာတတ်တဲ့ အခါမျိုးတွေ ရှိတတ်တယ်ဗျ၊ အဲဒီနားမှာ အသုံးချစရာရှိရင်တော့ အဲဒီအချိန်က အချိန်ကောင်းပဲ၊ အဟီး၊ လိင်ကိစ္စကို တွေးမနေပဲ နဲ့တောင်နေတာဆိုတော့ တော်တော်နဲ့ ပြန်မကျတတ်ဘူး၊
အဲဒီမှာ ဆွဲပေတော့ပဲဟဲဟဲ၊ ကျနော် ဖြစ်တတ်တာ ကိုပြောတာပါ၊ လူတိုင်းတော့တူချင်မှ တူမှာလေ၊ အခုလည်း တရေးနိုးလာတော့ ဘာမှ တောင် မစဉ်းစားရသေးဘူး ကျနော့်ကောင်ကြီးက သံချောင်းလိုမာတင်းနေ ပြီး၊ ဒေါ်ကြီးမထား စောက်ခေါင်းထဲမှာ တင်းကျပ်နေပြီ၊ အဲဒါကို အခွင့်ကောင်းယူဖို့ ခေါင်းကလည်း ချက်ခြင်းပြေးတယ်လေ၊ ဟဲဟဲ၊ အဲဒီတော့ ဖင်လေးကို နောက်ဆုပ်ပြီး ဖြေးဖြေးလေး ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်၊ ကျနော့်ကောင်ကြီးက သူ့အတွင်းသားနုနု ထဲမှာမာကြောနေတာကို သူ့သွေးကြောတွေကလည်း သိလို့ထင်တယ်၊ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ချောဆီက ထွက်နေပြီ ဆိုတော့ စိုထိုင်းထိုင်းလေးပေါ့။ကျနော်က တဝက်လောက်ဆွဲထုတ်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်သွင်းလိုက်တော့ ဒေါ်ကြီးငြီးသံလေးထွက်လာတယ်၊ သူလည်း နိုးလာပြီထင်တယ်၊ အဲဒီတော့ ကျနော်လည်း ပထမဆုံးစကားစပြောလိုက်ရတော့တယ်။ ….ဒေါ်ကြီး လေးဘက်ထောက်ပေးပါလား…. ..ဘာမှတော့ ပြန်မပြောဘူး အသာလေးကုန်းထပြီး လေးဘက်ထောက်ပေးရှာတယ်၊
ကျနော်ကလည်း ကိုယ့်ကောင်ကြီးကျွတ် မသွားအောင်ထိန်းပြီး အလိုက်သင့် ဒူးထောက်လိုက်ရတယ်၊ ဒေါ်ကြီးမထားက ကျွမ်းပါတယ်၊ ခါးလေးကိုနိမ့်ပြီး ဖင်လေးကို ကော့ပေးရှာတယ်၊ သူ့ဖင်ကြီးက ခါးကျင်ကျင်ကလေးကနေ လုံးကားပြီး တက်လာတယ်၊ အဲဒီနေရာလေးကို ကျနော် လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကိုင်ထိန်းရင်း အားရပါးရကို ဆောင့်လိုက်တာ၊ တဖွတ်ဖွတ်၊ တဖတ်ဖတ် နဲ့ ကျယ်လာလို့ ဘေးနားက အခန်းတွေကြားသွားမလား စိုးရိမ်ပြီး အရှိန်ပြန်လျှော့လိုက်ရတယ်၊ စောက်ရေးထဲ မိုးက တပေါက်နှစ်ပေါက်ပဲ၊ ကျတော့တယ်၊ ကျနော့်ကောင်ကြီးက မတန်တဆဖောင်းကား နေပြီး ဒေါ်ကြီးမထား အဖုတ်ထဲမှာ စေးကျပ်နေတော့ အကြောပေါင်းစုံနဲ့ ထိတွေ့နေရသလိုအရသာရှိလှတာကြောင့် ဇိမ်ဆွဲပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း လိုးနေမိတယ်၊ နောက်တော့ လျှပ်စီးတွေ လက်ပြီး မိုးပြန်သည်းလာပြန်တယ်၊ လျှပ်စီး ရောင်ကြောင့်တချက်တချက်မြင်နေရတဲ့ ဒေါ်ကြီးမထားရဲ့ ဆံပင်ဖွာယာကြဲ၊ကျောပြင်၊ ခါးသေးသေး၊ ကားစွံနေတဲ့တင်လုံးကြီးတွေက ကျနော့်စိတ်ကို ပြန်ကြွလာစေတာမို့ အရှိန်မြှင့်ပြီး တဖုန်းဖုန်းဆောင့်နေမိပြန်ပါတော့တယ်။
…ဖန်း..ဖန်း..ဖတ်ဖတ်.. ..ဖွတ်..ဖလုဖွတ်..ဖြွတ်… ကျနော်တို့ အသံမျိုးစုံကတော့ မိုးရေခေါင်မိုးကို သည်းသည်းမဲမဲ ရိုက်ခတ်သံအောက်မှာ ပျောက်နေပါတယ်၊ ကျနော်တောင် ခါးညှောင်းပြီး ဒူးနာသလောက်ရှိလာမှ ဒေါ်ကြီးမထားရဲ့ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားတွေက ကျနော့်ဒစ်ဖျားကို လက်နဲ့ ညှစ်သလို ဖျစ်ကနဲ ဖျစ်ကနဲ ညှစ်ပေးလာတာကြောင့် ကျနော်ထိန်းမထားနိုင်တော့ ပဲ သုတ်ရည်တွေကို ဟိုးစောက်ခေါင်းအတွင်းထဲထိရောက်အောင် ပန်းထည့်လိုက်မိပါတော့တယ်.။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံးချွေးတွေ စိုရွဲနေပါတယ်၊ ခန စောင်တွေ အဝတ်အစားတွေ မကပ်နိုင်ပဲ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ခန လှဲနေပြီး အပန်းဖြေနေကြပါတယ်၊ ခနနေမှ နည်းနည်းပြန်အေးလာတော့ ဒေါ်ကြီးမထားက သူ့ထမိန်ကို လှမ်းယူမလိုလုပ်တာကျနော်က ဆွဲယူပြီး ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်၊ နောက်မှ ငုံ့ပြီး သူ့ချိုချိုတွေကို စို့လိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်ကြီးမထားက ကျနော့်ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို လက်နဲ့ထိုးဖွသပ်ပေးရင်း၊ …မောင်ပေါ်ဦးကို ဝင်းဝင်း ပြောပြတယ်မဟုတ်လား….. ကျနော် ဘာမှ မပြောပဲ ငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်၊ ဒေါ်ကြီးမထားက ဆက်ပြောပါတယ်၊ ..မောင်ပေါ်ဦးနဲ့ ဝင်းဝင်းဖြစ်နေတာ ဒေါ်ကြီးသိနေတာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဝင်းဝင်းက သူကိုယ်တိုင်လည်းပါနေတော့ မောင်ပေါ်ဦးကို ပြောပြလိမ့်မယ်လို့ ဒေါ်ကြီးမထင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အခု မောင်ပေါ်ဦးလုပ်တဲ့ ပုံစံကသိလို့လုပ်တဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လေ၊ .. ..အင်…………. ကျနော့်ပါးစပ်က အဲလောက်ပဲတိုတိုးထွက်လာတယ်၊ အင်းမကျ ဟင့်အင်းမကျလေ၊ ဒေါ်ကြီးက ဆက်ပြောတယ်။ ..မောင်ပေါ်ဦးက အေအီးလုပ်ခဲ့တာမို့ လိုက်လုပ်ချင်တာမဟုတ်လား.. ..အဲဒါတော့ မဟုတ်ဘူးဒေါ်ကြီးမထား..ဒေါ်ကြီးကို အရင်က ထဲက တောင့်တယ် ကိုယ်လုံးအချိုးအဆစ်ကျတယ်ဆိုတာသိတယ်လေ၊ ဒါပေမဲ့ မလုပ်ရဲဘူး.. ..အဲဒီတော့ အေအီးတောင်လုပ်လို့ရသေးတာပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့၊
ဟုတ်လား.. ကျနော်တော့လုပ်လေမြုပ်လေဖြစ်နေပြီ၊ သူပြောတာတွေကလည်း မှန်သလိုရှိနေတော့ဘာပြန်ပြောရမှန်းကို မသိဘူးဖြစ်နေရတယ်၊ ..ဒေါ်ကြီးက အေအီးကို သနားလို့ပါ၊ သူက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ တာဝန်လည်းကြီးကြီးယူထားရလို့ နောက်သူ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ဆိုတော့ ထိန်းနေရတယ်လေ၊ မောင်ပေါ်ဦးတို့လိုကောင်မလေးတွေနဲ့ ရှုတ်လို့မရဘူး၊ ဒီလောက်ထရွနေတဲ့ ဟတ္တဏီ မမြတ်မွန်ကိုတောင်လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်တာ၊ ဒေါ်ကြီး ဝင်းဝင်းလေးကို တမင်ထိုးကျွေးခဲ့တာတောင်မစားခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကြောင့်ဒေါ်ကြီးကိုယ်တိုင် သူ့ကို ကွင်းဖွင့်ပေးတယ်ပြောမလား ပေါ်တင် စပေးလိုက်ခဲ့ရတာ၊ အဲတော့မှ သူ ဝင်းဝင်းလေးကိုလည်း လုပ်တော့တာခစ်ခစ်…. ..အကိုက ဒီပြင်မှာတော့ စားပါတယ်၊ အများကြီးကျနော်သိနေတာပဲ.. ..
ဒါပေမဲ့ သူက ဒီစခန်းမှာ အထီးကျန်နေတယ်လေကွာ မောင်ပေါ်ဦးအသိဆုံးပါ.. ..ဟုတ်တယ် ဒေါ်ကြီး ၊ ဒေါ်ကြီးကို ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်၊ နောက်အားလည်းနာတယ် ခွိခွိ.. ..ဟေ..မင်းဟာကြီးက ပြန်မာလာပြန်ပြီ..ခစ်ခစ်..ခက်တော့တာပါပဲ၊ ငါသေးပေါက်ဖို့တောင် အချိန်ရပါ့မလားမသိဘူး ခစ်ခစ်.. ဒေါ်ကြီးမထားက လည်း ပြောတာပါ၊ သူကလည်း ခပ်ပါပါ၊ ကျနော့်ကို ရေကုန်ရေခန်းကို လိုက်နိုင်တာ၊ ကျနော်တောင် တော်တော် ငြိသွားတယ်၊ အဟီး၊ လယ်တကွက်တော့ရပြန်ပြီပေါ့၊ အားရင်ထွန်ဖို့။ ခွိခွိ။ …………………………………… နောက်နေ့ ထမင်းစား ဆောင်မှာ ၁၀ နာရီလောက်မှ၊ ဒေါ်ကြီးမထား ပြင်ပေးတဲ့ ကြက်ဥ သုံးလုံးမွေကျော်နဲ့၊ ထမင်းကျော်ဝက်အူချောင်း၊ ရွာထဲက နွားနို့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်၊ အားရပါးရတီးနေတုန်း၊ ဦးကြီးဆောင် လည်းမတွေ့မိတာနဲ့ ဒေါ်ကြီးမထားကို မေးတော့ မနက် ကျနော်သူတို့ အခန်းက ပြန်သွားပြီး တနာရီလောက်ကမှ ပြန်လာပြီး အိပ်လိုက်တာ သိုးနေရောဆိုပဲ၊ ခုထိမထသေးဘူးတဲ့၊ ဒေါ်ကြီးမထား ဆိုမှ ပြောရအုန်းမယ် ကျနော်လည်း မနက်စောစောကြီး ဒေါ်ကြီးမထားတို့ အခန်းက လစ်လာပြီး ကိုယ့်အခန်းမှာ ကိုယ် တရေးနပ်လိုက်သေးတယ်၊ အကိုလည်း စခန်းမှာ မရှိတော့ ကိုယ့်ကို ဆူမယ့်သူလည်း မရှိဘူးမဟုတ်လား၊ အဲဒါကြောင့် မနက်စာကို နောက်ကျပြီး နေလည်စာနဲ့ ပေါင်းစားနေရတာ၊
မျက်နှာသစ်သွားတိုက်ပြီးတော့ ထမင်းစားဆောင်လာဖို့ကို မျက်နှာပူနေသေးတယ်၊ ညတုန်းက ကြမ်းချင်သလို ကြမ်းခဲ့ပြီး မနက် လင်းလင်းချင်းချင်းမှာ ဒေါ်ကြီးမထား ကိုဘယ်လို မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမလည်း လို့ တွေးနေမိတာ၊ အဟီး ။ ရောက်သွားတော့လည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဒေါ်ကြီးမထားက မျက်နှာအနေအထား ဘာမှ မပြောင်းဘူး ပုံမှန်ပဲ၊ သူပြင်ဆင်ပေးစရာရှိတာလေး တွေပြင်ဆင်ပေးတယ်၊ ကြက်ဥ တို့ဘာတို့ကတော့ သူစပယ်ရှယ်လုပ်ပေးတာထင်တယ်၊ အဟီး၊ ကျနော်လည်း ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ စားလိုက်ပြီး နည်းနည်းအစာပြေတာ နဲ့ လူလည်း ပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်၊ နောက်တော့ သရီးအင်ဝမ်း လ္ဘက်ရည်ထုပ် ကို ရေနွေးနဲ့ဖျော် ဇိမ်ခံစုပ်သောက်နေရင်းက၊ ဒေါ်ကြီးမထားရဲ့ ဖင်လုံးလုံး ကားကား ကြီးကို ကြည့်မိပြီး ပီတိဖြစ်မိတယ်။ ငါကွ ညက ကောင်းကောင်းဖိခဲ့ရတာ ဒီအိုးကြီးပဲလို့လေ။ ကျနော် ထမင်းစားဆောင်က ထွက်လာတော့ လမ်းမှာ မမြတ်မွန်နဲ့ တွေ့တယ် သူ့ကြည့်ရတာ ကွတကွတ နဲ့၊ မျက်နှာလေးလည်း နွမ်းနေသလိုပဲ။
…အမ မြတ်မွန် ဘာဖြစ်လို့လဲ နေမကောင်းဘူးလား..ခြေထောက်ကရောဘာဖြစ်တာလဲ… ..အေးကွယ် နည်းနည်းနေမကောင်းဖြစ်နေလို့၊ ခြေကလည်း ဒူးဆစ်လေခိုသွားတယ်ထင်တယ်.. ထမင်းစားဆောင်ဘက်ကို ထော့နဲ့ထော့နဲ့ နဲ့ဆက်လျှောက်သွားတဲ့ မမြတ်မွန်ကို အနောက်ကနေ လှမ်းကြည့်ရင်း ကမှ စဉ်းစားမိတယ်၊ ခွိ၊ ညက ဦးကြီးဆောင် ဘယ်လောက်များ ကြမ်းလိုက်လဲ မသိဘူး လို့ကြည့်ရတာ မမြတ်မွန်တောင် ကွနေတယ် ဆိုတော့၊ အဟီး။ ငါ့နှယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတွေ ပြန်တွေးလိုက်ရင် မိန်းမ ယူရမှာတောင် လန့်လာသလိုပဲ၊ အဟီး၊ ငါလည်း မိန်းမတောင် ယူဖြစ်ပါတော့မလားမသိဘူး လို့ တွေးရင်း ဆိုက်ထဲကို ထွက်လာခဲ့မိပါတော့တယ်။ အခု တော့လည်း မိန်းမ ရ လို့ ခလေးတောင်မှ အလယ်တန်းကျောင်သားကြီး ဖြစ်နေပါပြီ၊ အကိုရှိနေတုန်း နေချင်စရာလည်းကောင်း ပျော်စရာလည်း ကောင်းလှတဲ့ စခန်းကြီးက အကိုလည်း မရှိတော့ရော၊ ကျနော့်အတွက် နေလို့ မပျော်တော့ပါဘူး၊ အကိုက နိုင်ငံခြားကို အပြီးအပိုင်ထွက်သွားခဲ့တာမို့ ဒီတခါတော့ ကျနော့်ကို ခေါ်သွားလို့မရတော့ပါဘူး၊ ပထမ အကို အလုပ်ကနေထွက်မယ်ဆိုတော့ ကျနော်စိတ်ညစ်ရပါတယ်၊ ဘာလုပ်ရမှန်းလည်းမသိပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်မှာ ဝင်းဝင်း နဲ့ ဒေါ်ကြီးမထားအပြင်၊ အခြားကောင်မလေး တွေလည်း တယောက်နှစ်ယောက်ရှိတော့၊ သိပ်ကြီး သိသိသာသာ ပြောင်းလဲ လိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့၊ လူဘဝက ဒါရှိရုံနဲ့ မပြီးပြည့်စုံဘူးဆိုတာ ကျနော်သဘောပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်၊ စခန်းမှာ တနေ့တခြားပျင်းလာတာနဲ့၊ ကျနော်လည်း တခြားအလုပ်တခုကို ပြောင်းခဲ့ပါတယ်၊
နောက်တော့လည်း ဘယ်ကဘယ်လိုဖြစ်မှန်းတောင်မသိ၊ မိန်းမ ယူဖို့ အရွယ်ရောက်ပြီ လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး မိန်းမတယောက်ကောက်ယူလိုက်ပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်နဲ့ ဘာလိုလို ညာလိုလို ဖြစ်နေတဲ့ မူလတန်းပြကျောင်းဆရာမလေး ပေါ့၊ သူလေးက ရိုးပါတယ်၊ ကျနော်ထင်တာပဲလေ၊ ဒါပေမဲ့ သူများမိန်းမတွေကို လုပ်ခဲ့ဘူး၊ တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက များတော့ ကိုယ့်အလှည့်ကြတော့ ခံရမှာလည်း ကြောက်နေမိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ချစ်စရာသားလေး တယောက်ရပြီးတဲ့ အချိန်ကျတော့ လည်း သိပ်ပြီး မိန်းမ ကိုယ့်ကို ဖေါက်ပြန်မှာကို ဂရုမထားမိတော့ပါဘူး၊ နောက်တခုက ကျနော့် ဘဝကလည်း သိပ်အဆင်မပြေဘူးဗျ၊ တိုင်းပြည်အခြေအနေကလည်း အရင်တုန်းကလို မကောင်းတော့ဘူးလားမသိဘူး၊ ဂွင်မတည့်တာလည်းပါမှာပေါ့၊ ကျနော့် အလုပ်တွေက ရရစားစားလိုပဲ ဖြစ်နေတော့တယ်၊ ဟိုးအရင်တုန်းကလို၊ ရေလျှံတယ်ဆိုတဲ့ ကာလလေးတွေတောင်မရှိတော့ဘူး။
တခါတလေကျတော့လည်း အပေါက်အလမ်း မတည့်ပဲ စိတ်ညစ်စရာတွေချည်းပဲ ဆက်တိုက်ကြုံလာလို့ရှိရင်၊ လူတို့သဘာဝ၊ အားကိုးရာရှာဆိုသလိုပဲ၊ ဘာသာရေးဘက်ကို သွားပြီး ထွက်ပေါက်ရှာမိတယ်၊ အဲဒီအခါကျတော့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတရားတွေ ကြောင့် ကံမကောင်းဖြစ်ရတာလားလို့လည်း တွေးမိပါရဲ့၊ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်လေးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်၊ အတိတ်ဘဝက ကံလက်ကျန်လေးကြောင့်ပဲ၊လားမသိ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးတယောက်နဲ့၊ သစ္စာရှိတဲ့ ( ထင်ရတာပဲ ) အိမ်ထောင်ရှင်မလေး ရခဲ့တာပဲလို့တွေးနေမိတယ်၊ အဲဒါကြောင့်လည်း လက်ကျန်ဘဝလေးကို တတ်နိုင်သမျှ ကောင်းတာလေးတွေလုပ်သွား ရင်း ကံကောင်းလာပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိပါတော့တယ်။
0 comments on “အဆိုးနဲ့အကောင်း”
ကြော်တတ်တယ်..လှော်တတ်တယ် (အပိုင်းတစ်) →
Total visitors : 159,218
Total page view: 379,185